ဒိုမိန်းသည်နျူကလိယ accumbens တွင် cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြင့်ရရှိသောအကျိုးကိုအားပေးသည် (2014) - Your Brain On Porn
Dopamine (2014) ကနျူကလိယ accumbens အတွက် cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမြှင့်တင်အားဖြင့်ဆုလာဘ်ရှာ invigorates
J ကို neuroscience ။ 2014 Oct 22;34(43):14349-64. Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3492-14.2014 ။
du Hoffman ဟာ J ကို1, Nicola သည် SM2.
ဆုလာဘ်မှချဉ်းကပ်စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်နှောင့်အယှက်ပေးသော၏အခြေခံသပ္ပါယ်အပြုအမူဖြစ်ပါသည်။ နျူကလိယ accumbens (NAc) dopamine ကျန်းမာသန်စွမ်းဆုလာဘ်ရှာသက်ဝင်စေဖို့ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုလိုအပ်ပေမယ့်နောက်ခံအာရုံကြောယန္တရားမသိသောဖြစ်ပါတယ်။ ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကို dopamine အဆိုပါ NAc အတွက်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် NAc အာရုံခံအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်ပြုခဲ့နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ယူ။
သို့သော်တိုက်ရိုက်လင့်ခ် dopamine အဲဒီ receptor ကို Activation, NAc cue-evoked အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆုလာဘ်-ရှာအပြုအမူအကြားထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤတွင်ကျနော်တို့အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်နှင့်ဒေသခံ dopamine အဲဒီ receptor ရန်ဆေးထိုး၏တစ်ပြိုင်နက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဝတ္ထု microelectrode ခင်းကျင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုအားဖြင့် evoked, sucrose ဆုလာဘ်တစ်ခုခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုတာဝန်ဖျော်ဖြေကြွက်များ၏ NAc အတွက် D1 သို့မဟုတ် D2 ဖြစ်စေ receptors ၏ပိတ်ဆို့ရွေးချယ်စိတ်လှုပ်ရှား attenuates, ထိုသရုပ်ပြ, ဒါပေမယ့် inhibition မဟုတ်ပါဘူး။
ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့သညျဤ dopamine-မှီခို signal ကိုဆုလာဘ်-ရှာအပြုအမူများအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းတည်ထောင်ရန်။ ဤရလဒ်သည် NAc dopamine သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် cued ဆုလာဘ်-ရှာအပြုအမူ invigorates ပေးသောအားဖြင့်တစ်ဦးအာရုံကြောယန္တရားဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
keywords: cue-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံ, ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုနှိုးဆွ, dopamine, နျူကလိယ accumbens, ဆုလာဘ်ရှာ
အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ကနေ NAc ဖို့ dopamine projection ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူ (အားပေးအားမြှောက်သောအာရုံကြောဆားကစ်တစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်Nicola, 2007) ။ NAc dopamine function ကိုစမ်းသပ်မှုတွေအလျှော့လျှင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (ဆုလာဘ်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကွိုးစားအားထုမှလျော့နည်းများပါတယ်Salamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2012) နှင့်မကြာခဏဆုချ-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မှတွေကိုတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက် (di Ciano et al ။ , 2001; yun et al ။ , 2004; Nicola, 2007, 2010; Saunders နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2012) ။ ချဉ်းကပ်မှု၏အမြန်နှုန်းသော်လည်းချဉ်းကပ်ပုံအပြုအမူအစပျိုးဖို့အောင်းနေချိန်တိုးပွါး, ထိုရည်မှန်းချက်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ဝင်ငွေရန်လိုအပ်သည်လိုအပ်သောအော်ပရေတာအပြုအမူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်နိုင်စွမ်း: ဤလိုငွေပြမှုဆုလာဘ်ရှာ၏တိကျသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဆုလာဘ်လောင် (ထိခိုက်များမှာNicola, 2010) ။ Dopamine NAc အာရုံခံ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသြဇာသက်ရောက်ခြင်းဖြင့်ချဉ်းကပ်နည်းမြှင့်တင်ရန်ရမယ်, ဒါပေမယ့်ဒီသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏သဘောသဘာဝမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။ NAc အာရုံခံ၏ကြီးမားသောအချိုးအစား (ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ် inhibited နေကြတယ်Nicola et al ။ , 2004a; Roitman et al ။ , 2005; Ambroggi et al ။ , 2008, 2011; McGinty et al ။ , 2013), နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် (cued ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများမတိုင်မီကစတင်များနှင့်ရွေ့လျားအစပျိုးဖို့အောင်းနေချိန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းMcGinty et al ။ , 2013) ။ ထို့ကြောင့်ဤလှုပ်ရှားမှု cued ချဉ်းကပ်မှုအားပေးအားမြှောက်တဲ့ dopamine-မှီခို signal ကို၏လိုအပ်သည့်ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါမရှိမရှိမသိရသည်။
အဆိုပါ NAc, အ BLA နှင့် dorsal medial PFC (ရန် glutamatergic afferents ပေးပို့နှစ်ခုအဆောက်အဦများအတွက်အာရုံခံBrog et al ။ , 1993), (ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်Schoenbaum et al ။ , 1998; Ambroggi et al ။ , 2008), နှင့်ဤဖွဲ့စည်းပုံ၏ဖြစ်စေ၏ Reversible လုပ် inactivation (Ambroggi et al ။ , 2008; Ishikawa et al ။ , 2008) သို့မဟုတ် VTA ၏ (yun et al ။ , 2004) ကို NAc အတွက် cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား၏ပြင်းအားလျော့နည်းစေသည်။ ယင်းတွေ့ရှိချက် NAc cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား glutamatergic သွင်းအားစုများကမောင်းထုတ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု, ဒါပေမယ့် NAc dopamine ခြင်းမရှိဘဲ, ပင်ထိုအခိုင်ခံ့ excitatory သွင်းအားစု cue-evoked ပစ်ခတ်ရန်တိုးမောင်းထုတ်ရန်မလုံလောက်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ဤနိဂုံးချုပ်လောကမှာဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများက NAc အာရုံခံ (တွေကိုအားဖြင့် inhibited နေကြတယ်Nicola et al ။ , 2004a; Ambroggi et al ။ , 2011) နှင့်ကစိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်ပြုခဲ့ချဉ်းကပ်အပြုအမူကိုသက်ဝင်ပိုမိုအရေးကြီးလှသည်ရှိမရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ ထို့အပြင် VTA inactivation (DS) ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှိုးဆွမှုကိုလျှော့ချနိုင်အများအပြား dopamine-လွတ်လပ်သောယန္တရားများအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှား -evoked: အ BLA နှင့် PFC အတွက်လျှော့ချ cue encoding က, အ VTA (ထံမှစီမံချက်များခံယူသောSwanson, 1982); အဆိုပါ NAc (မှပရောဂျက်တစ်ခုကို GABAergic VTA အာရုံခံ၏လျှော့ချပစ်ခတ်ရန်ဗန် Bockstaele နှင့် Pickel, 1995); dopaminergic အာရုံခံ (ထံမှအချိုမှုသို့မဟုတ်လျှော့ချဖြန့်ချိStuber et al ။ , 2010) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ VTA inactivation (သာ NAc DS-evoked ပစ်ခတ်ရန်လျော့ကျစေပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း DS-evoked ချဉ်းကပ်အပြုအမူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့yun et al ။ , 2004), DS စိတ်လှုပ်ရှားရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလှုပ်ရှားမှုများအတွက်လိုအပ်သောအခွအေနေမယ့်အစားမှအလယ်တန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တိုက်ရိုက် cue-evoked ပစ်ခတ်ရန်အတွက် NAc dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ကြွက်ပြုမူအတွက်အသုံးပြုရန်တစ်ဝတ္ထုစုံစမ်းစစ်ဆေးကြံစည်: တစ်ပြိုင်နက်ယူနစ်ပစ်ခတ်ရန်လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် dopamine အဲဒီ receptor ရန်၏ပြုတ်ရည်ဘို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဗဟိုဆေးထိုး cannula, ပတျဝနျးကငျြနေတဲ့မြို့ပတ်ရထားလျှပ်ကူးပစ္စည်းခင်းကျင်း အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်ထားသောအာရုံခံ (ဝန်းကျင် extracellular အာကာသသို့du Hoffman ဟာ et al ။ , 2011) ။ ဒီအစီအစဉျကို dopamine အဲဒီ receptor ကို Activation, NAc အာရုံခံပစ်ခတ်ရန်နှင့်ဆုလာဘ်-ရှာအပြုအမူအကြားလင့်များတည်ထောင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြု: NAc dopamine receptors ၏ပိတ်ဆို့ cue-evoked အချက်ပြမှုများနှင့်ချဉ်းကပ်၏စတင်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်လျှင်ဤအာရုံခံတုံ့ပြန်မှုပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားပေးလိမ့်မယ် endogenous dopamine နဲ့ဒီ signal ကိုချဉ်းကပ်အပြုအမူများအတွက်လိုအပ်ကြောင်း။
ဆယျ့ငါးအထီး Long-အီဗန်ကြွက် (ဆိုက်ရောက်အပေါ် 275-300 ဂရမ်) ချားလ်စ်မြစ်မှရယူ singly သျောခဲ့ကြသည်။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်ကသူတို့ရောက်ရှိပြီးနောက်ကြွက်စမ်းသပ်ဖို့သူတို့ကို habituate မှ3ဃနေ့စဉ်မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ လေ့ပြီးနောက်ကြွက်တစ်နေ့လျှင်ကြွက် Chow ၏ 13 ဆယ့်ကန့်သတ်စားသောက်သောအစားအစာအပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ကြော်ငြာ libitum အစားအစာတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကန့်သတ်စားသောက်သောအစားအစာပေါ်ပြန်တင်လိုက်တယ်ခဲ့ပြီးသောနောက်, ခွဲစိတ်အောက်ပါ7ဃများအတွက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်အမျိုးသား Institutes နှင့်ကိုက်ညီခဲ့ကြခြင်းနှင့်ဆေးပညာအဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းကောလိပ်များ၏ Institutional တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အားလုံးအမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်များနှင့်အမူအကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းထုံးစံလုပ် Plexiglas အခန်းများ (40 စင်တီမီတာစတုရန်း, 60 စင်တီမီတာမြင့်သော) တွင်ရာအရပျကိုယူ။ ဤရွေ့ကား Faraday အိတ်များအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းသတ္တုပုံးအတွင်း၌တည်ရှိသောကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဗီဒို acoustic ရေမြှုပ်နှင့်အတူစီတန်းခဲ့ကြသည်ဖြူဆူညံသံအခနျးအတှငျးရှိပြင်ပဆူညံသံများကွားနိုငျ minimize တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံစပီကာမှတဆင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ကစားခဲ့သည်။ အော်ပရေတာအခန်းများပြုလုပ်၏တစ်ဖက်အပေါ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်ခရိုနီနှင့်တသားတမြို့ရိုးပေါ်မှာအကျိုးကို receptacle တပ်ဆင်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ receptacle ၏အရှေ့ဘက်တလွှားတစ်ဦးက photobeam receptacle entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်ကြိမ်တိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (Med Associates မှ) ၏ယာယီ resolution ကို 1 ms ဖြစ်ခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်များသည်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သူတို့အားအလားတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအောက်ပါပု DS တာဝန်အပေါ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြ (Nicola et al ။ , 2004a,b; Ambroggi et al ။ , 2008, 2011; Nicola, 2010; McGinty et al ။ , 2013) ။ ဆုနှစ်ခုကိုတစ်ကြိမ်လျှင်ဆုတစ်ခု - ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့် DS သို့မဟုတ်ကြားနေနှိုးဆွမှု (NS) ကိုပေးသည်။ အာရုံအာရုံစူးစိုက်မှုဆိုင်ရာအချက်များတွင် (၄၀၀ မှ ၄ မှ kHz မှ ၄၀၀ မှ ၄၀၀ kHz မှကြိမ်နှုန်းဖြင့်စက်ဝိုင်းစီးကျသော) နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းသေံ (၆၀ မဂ္ဂါဝပ်တွင် ၆ ကီလိုဂရမ်၊ ၅၀ မဂ္ဂါဝပ်မှပယ်ဖျက်သည်) တို့ပါဝင်သည်။ DS သို့မဟုတ် NS တစ်ခုသို့အထူးသေံ၏ခန့်အပ်မှုသည်ကြွက်များတစ်လျှောက်ကျပန်းဖြစ်သွားသည်။ Intertrial ကြားကာလ (ITIs) ကို ၃၀ ံနှင့်အများဆုံး ၁၅၀ s နှင့်အတူအကန့်အသတ်မရှိဖြန့်ဖြူးခြင်းမှကျပန်းရွေးကောက်သည်။ အဆိုပါ NS အမြဲတမ်း4s ကိုအဘို့အတင်ပြခဲ့သည်; အဆိုပါ NS စဉ်အတွင်းလီဗာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းခဲ့ကြသည်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပေမယ့်အဘယ်သူမျှမပရိုဂရမ်အကျိုးဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့ကျင့်မှုအစတွင်ကြွက်တစ်ခုစီအတွက်ဘယ်နှင့်ညာခလုတ်များကို“ Active” နှင့်“ မလှုပ်မရှား” ကျပန်းသတ်မှတ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်မူကွဲပြားသည်။ DS ရှိစဉ်အတွင်းတက်ကြွသောလီဗာအပေါ်လီဗာတုံ့ပြန်မှုသည် cue ကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးပထမဆုံးနောက်ဆက်တွဲ receptacle entry သည် 8% sucrose ဆုကို receptacle ရှိရေတွင်းတစ်တွင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ DS တုန့်ပြန်ချက်များသည်တုန့်ပြန်မှုမပြုခဲ့သောကြောင့် ၁၀ မိနစ်အကြာတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ITI (cue တင်ဆက်မှုများအကြား) နှင့်တုန့်ပြန်မှုများမအောင်မြင်သောလီဗာပေါ်ရှိတုံ့ပြန်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်းဆုမပေးနိုင်ပါ။ 400 နာရီလေ့ကျင့်ခန်းတွင် DSs ၏ ၈၀% နှင့် NS <၂၀% တို့ကိုတုန့်ပြန်သည့်တိုင်တိရိစ္ဆာန်များကို DS လုပ်ငန်းတွင်လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။
Cannulated microelectrode Array ကို။
ကနဦးလေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်ကြွက်ဗဟို microinjection လမ်းညွှန် cannula ပတျဝနျးကငျြရှစ်ဖြိုက်နက် microwire လျှပ်ပါဝင်သည်ဟု cannulated microarrays နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ ဤရွေ့ကားယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဆောက်လုပ်ထားနှင့်ထုံးစံလုပ် microdrives အတွက်တပ်ဆင်ထားခဲ့သည် (du Hoffman ဟာ et al ။ , 2011) ။ drive ကိုဝက်အူ၏ပြီးပြည့်စုံသောလက်ယာရစ်လှည့်အတူတူတိရိစ္ဆာန်အတွက်အာရုံခံအတော်ကြာထူးခြားတဲ့လူဦးရေကနေမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်, ventrally 300 μm (ထိုစုံစမ်းစစ်ဆေး၏လည်ပတ်ခြင်းမရှိဘဲ) တစ်ယူနစ်အဖြစ်လျှပ်နှင့် cannula သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါ cannulated Array ကိုသှငျးဖို့, ကြွက် (ခွဲစိတ်ဘို့ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့တစ်ဦး stereotaxic တူရိယာ၌ထားကြ၏du Hoffman ဟာ et al ။ , 2011; McGinty et al ။ , 2013) ။ မေ့ဆေး isoflurane (0.5-3%) နှင့်အတူသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကိုချက်ချင်းခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် 24 ဇ post ကိုခွဲစိတ်မတိုင်မီပဋိဇီဝဆေး (Baytril) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Cannulated Array ကို (1.4 မီလီမီတာ anterior နှင့် 1.5 မီလီမီတာ bregma ထံမှ lateral, နှင့်ဦးခေါင်းခွံကနေ 6.5 မီလီမီတာ ventral) ကို dorsal NAc core ကိုသို့မြန်မာနိုင်ငံသကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ electrodes များနှင့် microdrives အရိုး screw နှစ်ခုနှင့်ပါးစပ်တွင်း acrylic နှင့်အတူဦးခေါင်းခွံမှလုံခြုံခဲ့ကြသဖြင့်, obturators စွန်းလမ်းညွှန် cannulae စွန်းနှင့်အတူ flush ခဲ့ကြသည်နိုင်အောင်ဝါယာကြိုး obturators လမ်းညွှန် cannulae သို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်ဦးရေပြားရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ Neo-Predef နဲ့ကုသခဲ့ပါတယ်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များစမ်းသပ်ချက်နှင့်အတူဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏ 1 အပတ်ကခွင့်ပြုခဲ့သည်။ postsurgery analgesia ဘို့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက် nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေး ketoprofen ၏ 10 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ပေးထားခဲ့ကြသည်။
SCH23390 နှင့် raclopride Sigma ထံမှဝယ်ယူခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုရက်ပေါင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးလောလောလတ်လတ် 0.9% မြုံဆား၌သူတို့ကိုဖျက်သိမ်းကပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအခြမ်းနှုန်း 1.1 μlဆားနှင့်ဘေးထွက်နှုန်း 233390 μlဆားထဲမှာ 0.55 μg raclopride အတွက် 6.4 μg SCH0.8 ၏ဆေးများမှာအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ SCH233390 နှင့် raclopride အသီးသီး 12 နှင့် 17.5 မိကျော်ထုံမွှန်းခဲ့ကြသည်။ လေယာဉ်မှူးစမ်းသပ်ချက်တှငျကြှနျုပျတို့ 12 မိတည်တံ့ raclopride ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တာဟာ DS တုံ့ပြန်မှုအချိုးအစားအပေါ်သိသာထင်ရှားသောပေမယ့်ယာယီသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့က၎င်း၏ pharmacological သက်ရောက်မှု၏ယာယီပရိုဖိုင်းကို SCH23390 ၏ဆင်တူခဲ့ကြောင်းထိုကဲ့သို့သော raclopride ပြုတ်ရည်၏ကြာချိန်တိုးလာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှည်ရန်။ တစ်ဦးတည်းသာနှစ်နိုင်ငံသို့မဟုတ်တစ်ဖက်သတ်ထိုးမှတ်တမ်းတင် session တစ်ခု (တစ်နေ့လျှင်တစ်ဦး session တစ်ခု) နှုန်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်များအနည်းဆုံးတစ်ခုတည်းနှစ်နိုင်ငံတယောက်ရန်၏ဆေးထိုးခြင်း, တဦးတည်း (သို့မဟုတ်အတော်ကြာ) တစ်ဖက်သတ်ရန်ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အချို့သောတစ်ဖက်သတ်ရန်စမ်းသပ်ချက်စဉ်အတွင်းကျနော်တို့တစ်ပြိုင်နက်တည်းရန်လက်ခံရရှိကြောင်းကမ္ဘာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်းမှ contralateral တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ဆားထုံမွှန်း။
တပြိုင်နက်တည်း microinjection နှင့်အသံဖမ်းများအတွက်ယန္တရားယခင်ကဖော်ပြထားခဲ့ပြီး (du Hoffman ဟာ et al ။ , 2011) ။ Head စင်မြင့်မှ ဦး ဆောင်သည့်အသံသွင်းကြိုးသည် ၂၄- လိုင်းရှိလျှပ်စစ်အသွားအပြန်တစ်ခုတွင်ဗဟိုထွင်းဖေါက်အပေါက် (Moog) ဖြင့်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ၎င်းသည်အချက်ပြမှုကို electrophysiological recording system သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အခန်း ၂ ခု၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည့်တစ်ချောင်းတည်းသောစုပ်စက်တစ်ခုတွင်ဆေးထိုးနှစ်ခုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါပြွတ်ကနေအရည်လိုင်းများကိုအသွားအပြန်အထက်တွင်တပ်ဆင်ထား dual- ရုပ်သံလိုင်းအရည်ဆုံလည် (Instech ဓာတ်ခွဲခန်း) မှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ အရည်လိုင်းများသည်ဆုံလည် မှနေ၍ အသွားအပြန်တွင်း၏အပေါက်ကို ဖြတ်၍ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ကေဘယ်တစ်လျှောက် ဖြတ်၍ 24 gauge microinjectors တွင်ရပ်သည်။
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုမီ၊ မိုက်ခရို Injector များကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဖြေရှင်းချက်ဖြင့်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပြီးနောက်တိရစ္ဆာန်၏လမ်းညွှန်ဆေးခြောက်ထဲသို့ထည့်သည်။ အဆိုပါ microinjector အကြံပေးချက်များ microinjector ၏အစွန်အဖျားဟာလျှပ်ကူးပစ္စည်းအကြံပေးချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှင့် each0.5 μmတစ်ခုချင်းစီကိုလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ဗဟိုကနေလမ်းပြ cannulae ကျော်လွန် 670 မီလီမီတာတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်မဖြည့်မီမီ၊ အရည်လိုင်းများနှင့်မိုက်ခရို Injector များသည်ဓာတ်သတ္တုရေနံနှင့်ပြည့်နှက်ခဲ့ပြီး၊ post ကို hoc မူးယစ်ဆေးဝါးထိုးသွင်းခဲ့အတည်ပြုချက်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဦးခေါင်းဇာတ်စင်တိရစ္ဆာန်ချိတ်ဆက်ထားခဲ့ပါတယ်နှင့်အရည်လိုင်းခိုင်မြဲစွာစမ်းသပ်မှုများ၏ကြာချိန်အဘို့အရာဌာန၌ microinjectors စောင့်ရှောက်ရန်မှတ်တမ်းတင် cable ကိုမှလုံခြုံခဲ့ကြသည်။ ဒီလမ်းအတွက်ကိုပြင်ဆင်တိရစ္ဆာန်များအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့သည့်ကာလအတွင်းအနည်းဆုံး 45 မိ၏အခြေခံကာလများအတွက် DS တာဝန်လုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည် ဟူ. ၎င်း, သို့ဖြစ်လျှင်, ပြွတ်စုပ်စက်ဦးနှောက်ထဲသို့မူးယစ်ဆေးဝါးများမသွားအောင်မှအဝေးမှအပေါ်လှည့်ခဲ့ပါတယ်။ injection တိရစ္ဆာန်ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခန်းထဲကတံခါးကိုဖွင့်လှစ်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး, နှင့်အပြုအမူ session ကိုအခြေခံ, ပြုတ်ရည်များနှင့် postinfusion ကာလတလျှောက်လုံးမပြတ်မတောက်ဆက်ပြောသည်။
အာရုံကြောဗို့အားအချက်ပြနေတဲ့ဦးခေါင်း-ဇာတ်စင်အသံချဲ့စက် (စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအမြတ်) နဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်, 10,000 ကြိမ် amplified နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ (Plexon) ကို အသုံးပြု. digitized ။ ကျနော်တို့ 379 ကြွက်များတွင် 38 မှတ်တမ်းတင် / ဆေးထိုးအစည်းအဝေးများအတွက် 15 အာရုံခံကနေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါ 38 အစည်းအဝေးများ၏,7အဆိုပါ preinjection အခြေခံကာလအတွင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမအာရုံခံယုံကြည်စိတ်ချရသောအထီးကျန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုအမူအကျင့်မှစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကြောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကျနော်တို့ 31 ထံမှ 322 ကြွက်များတွင်ကောင်းစွာအထီးကျန်အာရုံခံမှတျတမျးတငျထားသော 12 မှတ်တမ်းတင် / ဆေးထိုးအစည်းအဝေးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်တမ်းတင် / ဆေးထိုးသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်, ထိုလျှပ်ကူးပစ္စည်း Array ကိုတင်ဆောင်လာသောအဆိုပါ microdrive အာရုံခံ၏အသစ်တစ်ခုကိုလူဦးရေထဲကနေစံချိန်မှ ventrally အဆိုပါလျှပ်ရွှေ့ဖို့အဆင့်မြင့် ~150 μm (ထို microdrive ဝက်အူများထဲမှတစ်ဝက်အလှည့်) ဖြစ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ် (သို့မဟုတ်လုံးဝမ) အာရုံခံလေ့လာတွေ့ရှိကြသည်မှန်လျှင်အာရုံခံရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်မှီ, စစ်ခင်းကျင်းသည်အခြားနေ့ကချီတက်ခဲ့သည်။
အချက်အလက်များ၏ဆေးထိုး၏အဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအ 45 မိ (40 s) ကိုအတူစတင်မ 33 မိ, အရန်များပြုတ်ရည်ရှေ့တော်၌ထို 2000 မိကဲ့သို့၎င်း, အသီးသီး preinjection, postinjection နှင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးသောပြန်လည်နာလန်ထူအချိန်ကာလသို့ခှဲဝေခဲ့ကြသည် (စုစုပေါင်း 2-3 ဇအတွက်ကြာမြင့်သော) တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခု။ အဆိုပါ postinjection ကာလမြန်မာနိုင်ငံသထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာမူးယစ်ဆေးဝါး (မိမိတို့၏အကြီးမြတ်ဆုံးအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများရှိသည်သောကာလအတွင်းအချိန်ကိုမှကိုက်ညီသဖန်းသီး။ 1C).
DS-cued ချဉ်းကပ်အပြုအမူအပေါ် dopamine အဲဒီ receptor ရန်၏ဆိုးကျိုးများ။ Aအဆိုပါ DS တာဝန်များ၏သိထား။ B, အလယ်အလတ် (dot) နှင့်အလယ်တန်း quartiles အားလုံးအမူအကျင့်အစည်းအဝေးများများအတွက် preinjection ကာလအတွင်း DS (လိမ္မော်ရောင်) နှင့် NS (အပြာ) တုံ့ပြန်မှုအချိုး၏ (ဒေါင်လိုက်လိုင်း) ...
တစ်ခုတည်းသောယူနစ်များကိုသီးခြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို အသုံးပြု၍ Offline Sorter (Plexon) နှင့် off-line ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဆူညံသံအဆင့် (<100-20 μV) နှင့်လုံး ၀ ကွဲပြားသောကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသော waveforms (> 50 μV) နှင့်အတူယူနစ်များကိုနောက်ဆက်တွဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Interspike ကြားကာလဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် Cross-correlograms များကိုတစ်ခုတည်းယူနစ်အချင်းချင်းနှင့်နောက်ခံဆူညံသံမှကောင်းစွာအထီးကျန်သေချာစေရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် (Neural Explorer ကို software ကို; Nex-Tech) ။ verified spikes ၏အချိန်တံဆိပ်ခေါင်းများ R software ကိုပတ်ဝန်းကျင်၌ထုံးစံလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ 50Ms အချိန် bins တွင် DS နှင့် NS န်းကျင်ဆောက်လုပ်ခဲ့သော Peristimulus အချိန် histogram များကို အသုံးပြု၍ cue-evoked excitations များကိုစစ်ဆေးရန်အသုံးပြုသည်။ ကိန်းဂဏန်းများ 2A, , 3,3, , 4,4, , 55A, , 66A, , 77A, , 88Aနှင့် and1010A-C ကို။ တစ်ဦးအာရုံခံဆဲလျသိသိသာသာ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားပြခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရန်, Poisson ဖြစ်နိုင်ခြေဖြန့်ဖြူး function ကိုအသီးအသီး cue ရှေ့တော်၌ထို 10 s ကိုအခြေခံကာလအဘို့တွက်ချက်ခဲ့သည်။ က cue စတင်ခြင်းပြီးနောက် 99 နှင့် 50 ms အကြားတစျခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို 50 ms bins အတွက်အခြေခံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများ၏ဖြန့်ဝေ၏အထက်ပိုင်း 200% ယုံကြည်မှုကြားကာလအထက်ပျှမ်းမျှဆူးရေတွက်ပြလျှင်တစ်ဦးကအာရုံခံဆဲလျ DS စိတ်လှုပ်ရှားထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ preinjection အခြေခံကာလအတွင်းသိသိသာသာ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားနှင့်အတူအာရုံခံအဘို့, DS နှင့် NS စတင်ခြင်းမှသော့ခတ် 50 ms bins အချိန်အတွက်ပျမ်းမျှပစ်ခတ်ရန်နှုန်းမှာတစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုစီကာလအတွက်ရရှိသောခဲ့သည်, ထိုပျှမ်းမျှနှင့်ပျမ်းမျှ (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 2ကို C-E, , 55A, , 66A, , 77A, , 88A, , 1010B,C) အာရုံခံဖြတ်ပြီးပစ်ခတ်နှုန်းထားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ခဲ့ကြသည်။ ကစာရင်းအင်းရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. NS စိတ်လှုပ်ရှားနှင့်အတူအာရုံခံ (နီးပါးလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုလည်းမပြ [သည့် DS အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ယခင်ကအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်သောကြောင့်Ambroggi et al ။ , 2011)] ကျနော်တို့သိသိသာသာ DS တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအားလုံးအာရုံခံအဘို့အ NS တုံ့ပြန်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ မဟုတ်ရင်ညွှန်မဟုတ်လျှင်, အတွင်း-အာရုံခံဆဲလျ Wilcoxon ရာထူးပေါင်းလဒ်စမ်းသပ်မှုအသုံးပြုသောအားလုံးစာရင်းအင်းနှိုင်းယှဉ်။
DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားနောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်လီဗာဖို့နီးကပ်ဝှက်။ Aသိသာထင်ရှားသော excitatory နှင့်အတူ 145 အာရုံခံများအတွက်အဆိုပါ DS ၏စတင်ခြင်း (လိမ္မော်ရောင်သဲလွန်စ) သို့မဟုတ် NS (အပြာရောင်သဲလွန်စ) မှ aligned, ပျမ်းမျှ preinjection အနီးအနားဖြစ်ရပ်အချိန် Histogram ...
ဥပမာအားအာရုံခံ D1 နှင့် D2 ရန် DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားလျှော့ချဖော်ပြသည်။ rasterizer နှင့်သက်ဆိုင်ရာ Histogram DS စတင်ခြင်းမှ aligned လေးကွဲပြားခြားနားသော DS-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံများ၏ပစ်ခတ်ပြသပါ။ ဒေတာကိုချက်ချင်းစတင်ရှေ့ကနောက်ဆုံး 40 စမ်းသပ်မှုတွေထံမှများမှာ ...
cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားအပေါ်နှစ်နိုင်ငံ dopamine ရန်ဆေးထိုးခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအစမ်း-by-ရုံးတင်စစ်ဆေးအခြေခံပေါ်မှာအပြုအမူသက်ရောက်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ A, Cပြသသည့်တူညီသောအာရုံခံများအတွက်လီဗာကိုရောက်ရှိရန်ကြွက်၏အောင်းနေချိန်ကိုအာရုံခံနိုင်အောင် encoding ဖြင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ...
D1 အဲဒီ receptor activation DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဘို့လိုအပ်ပါသည်။ A, အနီးအနားဖြစ်ရပ်အချိန် Histogram အဆိုပါ preinjection ကာလအတွင်းသိသိသာသာ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားနှင့်အတူအာရုံခံအဘို့အ DS စတင်ခြင်းမှ aligned ။ သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးပျမ်းမျှ± SEM ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းကိုညွှန်ပြ ...
D2 အဲဒီ receptor activation DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဘို့လိုအပ်ပေသည်။ A, အနီးအနားဖြစ်ရပ်အချိန် Histogram raclopride ဆေးထိုးခြင်းမပြုမီကာလအတွင်းသိသိသာသာ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားနှင့်အတူအာရုံခံအဘို့အ DS စတင်ခြင်းမှ aligned ။ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားနှစ်နိုင်ငံလျှော့ချခဲ့သည် ...
D1 အဲဒီ receptor activation NS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဘို့မလိုအပ်ပါ။ A, အနီးအနားဖြစ်ရပ်အချိန် Histogram အဆိုပါ preinjection ကာလအတွင်းသိသိသာသာ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားနှင့်အတူအာရုံခံအဘို့အ NS စတင်ခြင်းမှ aligned ။ ဤရွေ့ကားလူဦးရေလုံးဝ, အရှင်အတူတူပင်အာရုံခံထပ် ...
D2 အဲဒီ receptor activation NS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဘို့လိုအပ်ပေသည်။ A, အနီးအနားဖြစ်ရပ်အချိန် Histogram အဆိုပါ preinjection ကာလအတွင်းသိသိသာသာ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားနှင့်အတူအာရုံခံအဘို့အ NS စတင်ခြင်းမှ aligned ။ NS စိတ်လှုပ်ရှားနှစ်နိုင်ငံနှင့် ipsilateral အခြေအနေများအတွက်ကိုလျှော့ချခဲ့သည် ...
ပုံ 10 ။
ဆားပြုတ်ရည် DS- သို့မဟုတ် NS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားထိခိုက်စေမ D1 မဟုတ်သလို D2 မအဲဒီ receptor activation အခြေခံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့လိုအပ်ပါသည်။ A, လူပျို DS-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံဆဲလျဆားပြုတ်ရည်ကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသော။ ကွန်ဗင်းရှင်းသူတို့အားတူညီကြသည် ...
ဘို့ ပုံ 4, ငါတို့ကလီဗာရောက်ရှိဖို့အောင်းနေချိန်အပေါ်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ရန်ဆေးထိုး၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်မှု -by- ရုံးတင်စစ်ဆေးအခြေခံပေါ်မှာ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ပြင်းအားအပေါ်ရန်၏သက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမ ဦး စွာစမ်းသပ်မှုတိုင်းတွင် DS စတင်ပြီးနောက်ပျမ်းမျှပစ်ခတ်မှုနှုန်းသည် ၁၀၀ မှ ၄၀၀ မိုင်နှုန်းရှိကြောင်း၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ပြန့်ပွားမှုမတိုင်မီသိသိသာသာ DS စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့နောက် neuron တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ကြွက်များ၏အောင်းနေမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောစမ်းသပ်မှုများ၌လီဗာကိုရောက်ရှိရန်စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်စမ်းသပ်မှုပမာဏနှင့်ကြွက်များ၏အောင်းနေချိန်တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ Spearman ၏ရာထူးအဆင့်ဆက်စပ်မှုကိန်းကိုတွက်ချက်သည်။ ဤရွေ့ကားဆက်စပ်မှုအတွက် histograms အတွက်ကြံစည်ခဲ့ကြသည် ပုံ 4B,D။ အားလုံး DS စမ်းသပ်မှုတွေဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, တိရစ္ဆာန်ဟာလီဗာနှိပ်ခဲ့ပါဘူးလျှင် 10 s ကိုတစ်ဦးအောင်းနေချိန် (cue တင်ဆက်မှုအများဆုံးအရှည်) ထိုရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့တာဝန်ကျတယ်။ အထက်သတ်မှတ်အဖြစ်ကျနော်တို့ preinjection ကာလအဘို့ဤအဆက်စပ်မှုကိန်းတွက်ချက်; ကျနော်တို့ကတိရိစ္ဆာန်များနှစ်နိုင်ငံပြုတ်ရည်ပြီးနောက်တုံ့ပြန်သည့်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေအပေါ် latency ၏ကျယ်ပြန့်နမူနာရရှိရန် 1000 ့အားဖြင့် postinjection ကာလတိုးချဲ့။ တစ်ဦးချင်းစီဆက်စပ်မှု၏အရေးပါမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်, ငါတို့ asymptotic တစ်-tailed နှစ်ခုကိုအသုံးပြု tတစ်ခုအတိအကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ -approximation p ဆက်ဆံရေးရာထူးဒေတာအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အခါတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ထိုအခါမှသာ Wilcoxon ရန်ပြုတ်ရည်မီနှင့်အပြီးဆက်စပ်မှုကိန်း၏ဖြန့်ဝေ၏ပျမ်းမျှနှိုင်းယှဉ်ဖို့စမ်းသပ်တွဲကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
NAc အာရုံခံအလွန်မကြာခဏသုည spanning ယုံကြည်မှုကိုကြားကာလ၏အောက်ပိုင်းဘောငျနှင့်အတူအနိမ့်အခြေခံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများရှိသည်ကြောင့်, ပြုခဲ့ ပို. ခက်ခဲ detect နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားထက်တွက်ချက်ရန်လည်းဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် cue စတင်ခြင်းပြီးနောက်အဆက်ဆက် 50 ms အချိန် bins အတွက်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုတွက်ချက်ရန်, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ငါတို့သည်လည်းအသုံးပြုကြသည်လက်ခံ operating ဝိသေသ (အာအိုစီ) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ဦးထက်ပိုသောအထိခိုက်မခံတဲ့နည်းလမ်းကို detect ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည့်အထက်ဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အပြင် အဆိုပါ 10 s ကို precue အခြေခံအတွက်ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းကွဲပြားခဲ့သည်။ ဤသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ preinjection နှင့် postinjection ကာလအဘို့သီးခြားစီဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီဘင်, ကြှနျုပျတို့အာအိုစီကွေး (AUC) အရထိုဒေသတွင်တွက်ချက်; ပိုမိုနီးကပ်စွာ 0.5 သို့မဟုတ်0မှတန်ဖိုးအာရုံခံဆဲလျအသီးသီးဘယျလိုမှသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားကြောင်း သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုညွှန်ပြသော်လည်း 1 ၏ AUC တန်ဖိုးများ, precue ပစ်ခတ်ရန်အနေဖြင့်အဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်ဖော်ပြသည်။ တစ်ဦးဘက်မလိုက်ဖက်ရှင်တှငျမှတျတမျးတငျထားသအာရုံခံ၏တစ်ခုလုံးကိုလူဦးရေဖြတ်ပြီး postcue အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုဖော်ကျူးရန်, ပစ်ခတ်နှုန်းထားများနှင့် AUC တန်ဖိုးများ 50 ms bins ဘို့တွက်ချက်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဒေတာချောမွေ့စေခြင်းငှါ, bins အဆက်ဆက် AUC ကွန်ပျူတာ 10 ms အားဖြင့် advanced ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပန်းခင်းလမ်း AUC တန်ဖိုးများထို့နောက်အတွက် (လာမယ့် 10 ms အတွင်း AUC ကိုယ်စားပြုတစ်ဦးချင်းစီရဲ့တန်ဖိုးကိုနှင့်အတူ) 50 ms resolution နဲ့အပူမြေပုံအဖြစ်ကြံစည်ခဲ့ကြသည် ကိန်းဂဏန်းများ 5B, , 66B, , 77B, , 88Bနှင့် and1010D,E.
ထပ်ပြီး ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် AUC တန်ဖိုးများ၊ ထပ်ခါထပ်ခါမပြုလုပ်သော ၅၀ ms bins တွင်တွက်ချက်သည်ပစ်ခတ်မှုတွင်သိသိသာသာကွာခြားမှုရှိ / မရှိကိုတွက်ချက်သည်။ အမှိုက်ပုံးတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံး bootstrapped AUC တန်ဖိုး ၁၀,၀၀၀ အားကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအခြေခံပစ်ခတ်မှုနှုန်းနှင့်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော postcue bin တွင်ပစ်မှတ်များမှပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် AUC တန်ဖိုးသည် bootstrapped တန်ဖိုးများဖြန့်ဖြူးခြင်းမှဆွဲယူထားသောဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုရှိသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ <50 ဖြစ်လျှင်, ငါတို့သည်အမှိုက်ပုံးထဲမှာပစ်ခတ်မှု precue အခြေခံကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်စဉ်းစား။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတ်မှတ်ထားသည့်အခြေခံပစ်ခတ်မှုထက်သိသိသာသာကြီးသည်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောဘင်တစ်ခုချင်းစီတွင်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းများသောအာရုံခံဆဲလ်အရေအတွက်ကိုရေတွက်ပြီး၊ ထိုတန်ဖိုးများကိုစုစုပေါင်းလူ ဦး ရေ၏အပိုင်းအစများအဖြစ်ကြံစည်ခဲ့သည်။သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5C, , 66C, , 77C, , 88C, , 99B,D, , 1010F,G).
ပုံ9။
receptacle entry ကိုဆုချဖို့ aligned အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု ipsilateral သို့မဟုတ် contralateral D1 သို့မဟုတ် D2 ရန်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ A, Cထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, အာအိုစီ AUC တန်ဖိုးများကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့်ပြသနေကြသည် ပုံ 5Bအချိန် မှလွဲ. bins (200 ms) ရှည်နဲ့ဘက်မလိုက်များမှာ ...
ကျွန်တော်တစ်ဦး data တွေကိုလျှော့ချရေးချဉ်းကပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ preinjection နှင့် postinjection ကာလအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်ဘယျလိုမှမအာရုံခံ၏အချိုးအစားနှိုင်းယှဉ်ရန်။ ပထမဦးစွာကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအာရုံခံဆဲလျသိသိသာသာစိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်တားစီးပြရသော cue စတင်ခြင်းပြီးနောက် 50 နှင့်0့အကြား 1 ms bins ၏အစိတ်အပိုင်းတွက်ချက်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်တစ်ဦးတွဲ Wilcoxon စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူ preinjection နှင့် postinjection ကာလတွင်ဤအပိုငျးနှိုင်းယှဉ်။ နှစ်ဦးစလုံး preinjection နှင့် postinjection ကာလများတွင်မည်သည့်ဘင်အတွက်သိသာထင်ရှားသောမော်ဂျူပြမအာရုံခံဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့ကြသည်နှင့်အသိသာ bins ၏ပျမ်းမျှအစိတ်အပိုင်းဖေါ်ပြခြင်းမကောင်းသောအကြံအတွက်မပါဝင်ခဲ့ကြသည် (စီအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ် dot နှင့်ပါးမုနျးမှေးကွက် သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5C, , 66C, , 77C, , 88C, , 1010F,G) ။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း Post-DS ပြတင်းပေါက်များနှင့် Pre-DS အခြေခံအကြားလှုပ်ရှားမှုမရှိခြားနားချက်နှင့်အတူအာရုံခံ၏ကြီးမားသောလူဦးရေရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖျက်သိမ်း; ဒီလူဦးရေအနည်းငယ်သာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါသည်, သေးက0ဆီသို့သိသိသာသာ bins ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်သည်နေကြပါတယ်နှင့်ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်သိသာ bins ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်လျှောက်လျော့နည်းခြင်းနှင့်တိုးနှစ်ဦးစလုံးဖုံးကွယ်ကြောင့် null တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကတေယျ။
အလားတူဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဆုလာဘ်အိုးထဲသို့ဝင်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်စားသုံးမှု -related ပစ်ခတ်မှုများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များ>5s များအတွက်receptရိယာ၌ဆက်လက်တော်မူ; ထို့ကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာသောကြားကာလများကိုဖမ်းယူရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် 200 ms bins ကို အသုံးပြု၍ ရလဒ်များကိုပြသည်။သဖန်းသီး။ 9) ။ ကပြုခဲ့များအတွက်0ထံမှ 1.5 ့ဖို့ဖြစ်တယ်သော်လည်းအဆိုပါ preinjection နှင့် postinjection ကာလအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့အာရုံခံ၏အချိုးအစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အချိန်င်းဒိုး0ထံမှ5s ကိုရ၏ သူတို့ကပိုယာယီဖြစ်တော်မှာကြောင့်တိုတောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဝင်းဒိုးကိုစိတ်လှုပ်ရှားအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အာအိုစီ R. များအတွက် proc အထုပ်ကို အသုံးပြု. ဆေးပညာအမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကွန်ပျူတာ Cluster ၏အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းကောလိပ်အပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်လေ့လာဆန်းစစ်
အလုပ်တခုကိုဖြစ်ရပ်များပြင်ပတွင်ဖြစ်ပေါ် "အခြေခံ" ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကျနော်တို့ရန်အသီးအသီး DS preinjection နှင့် postinjection မတိုင်မီ 10 s ကို bins အတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပစ်ခတ်ရန်မှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ DSs တစ်ဦးအမူအကျင့် session တစ်ခုအတွင်းမှာသည့်အချိန်တွင်မဆိုနီးပါးတန်းတူဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူတင်ပြကြသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအခြေခံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများ၏ကျပန်းနမူနာဖို့ function ညီမျှသည်။ အာရုံခံ (ကတွဲ Wilcoxon စမ်းသပ်မှုနှင့်အတူဤအုပ်စုများအတွင်း (မူးယစ်ပြုတ်ရည်မတိုင်မီ) သိသာထင်ရှားသော DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားပြအဖြစ်ခွဲခြားသို့မဟုတ်မ, အဲဒီနောက် preinjection နှင့် postinjection ကာလအတွက်အခြေခံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကြ၏သဖန်းသီး။ 10H,I) ။ ငါတို့သည်လည်း DS-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံများအတွက် linear မထိုက်မတန်ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်စည်းလုံးမှုလိုင်း (1 ၏ဆင်ခြေလျှော) ဤလိုင်း၏ဆင်ခြေလျှောနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်တူဘာသာရပ်မှလာသောအချက်အလက်များ၏အစိတ်အပိုင်းအစုပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါလျှင် (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 2ကို C-E, , 55A,C, , 66A,C, , 77A,C, , 88A,C, , 99B,D, , 1010B,C,F,G), p တန်ဖိုးများကို Bonferroni တညျ့ကြ၏ ဆိုလိုသည်မှာယင်း p တနျဖိုးကိုဖန်ဆင်းလျှက်နှိုင်းယှဉ်၏အရေအတွက်အားဖြင့်များပြားစေခဲ့သည်။ တညျ့ p တန်ဖိုးများလျှင်သိသာစဉ်းစားခဲ့ကြ p <0.05 ။ အားလုံးပြင်ဆင်ချက်မှလွဲ။3၏အချက်နှင့်အတူလုပ်ခဲ့ကြသည် ပုံ 2ကို C-E, အရာအတွက်အချက်2ဖြစ်ခဲ့သည်။
စမ်းသပ်မှုများအရကြွက်၏အနေအထားကို overhead ကင်မရာ (30 frames / s) နှင့် computer tracking tracking system (Cineplex; Plexon) ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ အဆိုပါစနစ်ကခြေရာခံ x နှင့် y မှတ်တမ်းတင်ခေါင်းကိုဇာတ်စင်တွဲနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားရောင်စုံအယ်လ်အီးဒီ၏ရာထူး။ ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (McGinty et al ။ , 2013), ကျွန်တော်တစ် ဦး ချင်းစီဗီဒီယိုဘောင်တစ်ခုအတွက် LED အနေအထားများအကြားဗဟိုအချက်ကိုဖော်ပြသည်တဲ့ centroid တွက်ချက်။ ပျောက်ဆုံးနေသောဒေတာအချက် ၁၀ ခုထိဘောင်ကွက် ၁၀ ခုအထိသည် linear interpolation နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ > 10 frames များပျောက်နေသောရှားပါးဖြစ်ရပ်များတွင်, ဒေတာစွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုဖရိမ်တစ်ခုစီအတွက် centroid ၏အနေအထားအကြားအကွာအဝေး၏ SD ကိုတွက်ချက်ပြီးအချိန်ပြတင်းတွင်± 10 ms ။ ဤ SD တိုင်းတာမှုများသည်ဗီဒီယို၏ frame အတွက် locomotor index (LI) ဖြစ်သည်။ log-transform LIs များသည်ပျံ့နှံ့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ အနိမ့်ဆုံးအမြင့်မှာလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်သာရှိခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝမလှုပ်ရှားသောနေရာများကိုကိုယ်စားပြုသည်။Drai et al ။ , 2000) ။ ကျနော်တို့ထို့နောက် LIs ၏ဖြန့်ဖြူးဖို့နှစ်ခု Gaussian လုပ်ဆောင်ချက်များကို fit, ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအနည်းဆုံးခေရှိရာအမှတ်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှုကိုတံခါးခုံကိုဆုံးဖြတ်သည်။
လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ locomotor တံခါးခုံအထက် LIs နှင့်အတူအနည်းဆုံးရှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဘောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ လှုပ်ရှားမှုစတင်ခြင်း၏အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့တိရစ္ဆာန် cue စတင်ခြင်းမှာနေတုန်းပဲကြီးထို့နောက် LI လှုပ်ရှားမှုတံခါးခုံကိုကျော်လွန်သော cue စတင်ခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးဘောင်များအကြားအောင်းနေချိန် (တွက်ချက်ထားတဲ့အတွက် DS စမ်းသပ်မှုတွေရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကန့်သတ်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 1D-F ကို, , 22B,D) ။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်မည်သည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမျှလှုပ်ရှားမှုများကိုတိုင်းတာမထားပါက၎င်းအမှုစစ်ဆေးခြင်း၏ကြာမြင့်ခြင်းကို> 10 s (cue တင်ဆက်မှုအရှည်) ဟုသတ်မှတ်သည်။ သဖန်းသီး။ 1D) ။ ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုတွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကနေချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်ရသောအခါအလားတူရလာဒ်များ (Data ပြမဟုတ်) ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ DS-cued လှုပ်ရှားမှုအောင်းနေချိန်ဖြန့်ဝေထို့နောက်ကြွက်ကိုဖြတ်ပြီးထို့နောက်ပါတီအသီးသီးမှခဲ့ကြသည်နှင့်ပျမ်းမျှတစ်ဦး Wilcoxon စမ်းသပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အများဆုံးမြန်နှုန်းမှအောင်းနေချိန်များကိုတွက်ချက်ခြင်းနှင့် DS-cued လီဗာ-ညွှန်ကြားလှုပ်ရှားမှုတွေ၏မြန်နှုန်းကိုဆိုလိုတာမှကျနော်တို့ကို (ကြွက် DS စတင်ခြင်းမှာပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်လျှင်ပင်တစ်လီဗာစာနယ်ဇင်းတွေနဲ့အဆုံးသတ်သောသူအပေါင်းတို့သည်စမ်းသပ်မှုတွေကိုအသုံးပြုသဖန်းသီး။ 1E,F).
တိရစ္ဆာန်များနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း Euthasol နှင့်အတူ anesthetized နှင့်ဆားနှင့် 4% formalin နှင့်အတူ intracardially perfused ခဲ့ကြသည်။ တိုက်ရိုက်လက်ရှိ (15 μA) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထုတ်လုပ်ဖို့ ~30 s ကိုများအတွက် Array ကိုအတွက်လျှပ်တစ်ခုချင်းစီရှောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်ငန်းများ၌မကုန်မှီတိုင်အောင်ဦးနှောက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် formalin ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး cryostat နှင့်အတူသွေးတွေစီးထွက်လာမီ, ဦးနှောက်ရက်ပေါင်းများစွာ 30% sucrose အတွက်နှစ်မြှုပ်ခြင်းအားဖြင့် cryoprotected ခဲ့ကြသည်။ ကဏ္ဍများ (50 μm) cannula နှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပုဒ်နှင့်တွေ့ရှိရပါသည် (မြင်ယောင်မှ Nissl ပစ္စည်းဥစ္စာဘို့အစွန်းခဲ့ကြသဖန်းသီး။ 11).
ပုံ 11 ။
ရန်ဆေးထိုးဆိုဒ်များ Histological ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး။ ပုံဟာ NAc (bregma ထံမှ 0.8 မီလီမီတာ-2.8 မီလီမီတာ anterior) ၏ anterior-posterior အတိုင်းအတာ၏အများစုကြာရှည်တယ်လို့ကြွက်ဦးနှောက်နှစ်ခု Coronal ကဏ္ဍများကိုသရုပ်ဖော်သည်။ Black ကအစက်ကိုကိုယ်စားပြု ...
ကျနော်တို့ 30 s ကိုပျမ်းမျှ variable ကိုကြားကာလမှာနှစ်ခုကိုအာရုံလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူကြွက်တင်ဆက်: အကျိုးကို-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် DS နှင့်တစ်ဦး NS (သဖန်းသီး။ 1A; Nicola et al ။ , 2004a,b; Ambroggi et al ။ , 2008, 2011; McGinty et al ။ , 2013) ။ အဆိုပါ DS ကာလအတွင်းတစ်ဦးကလီဗာစာနယ်ဇင်းပု cue ရပ်စဲနှင့် sucrose တစ်ဦးမျက်ရည်စက်လေးတွေအကျိုးကို receptacle သို့ entry ကိုအပေါ်သို့လက်သို့အပ်သဖြင့်, တိရိစ္ဆာန်များ 10 ့အတွင်းကိုတုံ့ပြန်ဘူးလျှင်, cue ဆုလာဘ်ပေးပို့နှင့်စတင်အဆိုပါ intertrial ကြားကာလမရှိဘဲရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ ဒီကြားကာလအတွင်းမှာနှင့် NS စဉ်အတွင်းတုံ့ပြန်ချက်မျှပရိုဂရမ်အကျိုးဆက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ NSS ကိုအပြီးအစဉ်အမြဲ 10 ့ခဲ့ကြသည်။ အများဆုံး DSs မှတုန့်ပြန်ရာလေ့ကျင့်သင်ကြားတိရိစ္ဆာန်များ, ဒါပေမယ့်အနည်းငယ် NSS ကိုအပြီး (သဖန်းသီး။ 1B), အ NAc core ကိုမှပစ်မှတ်ထား cannulated Array ကိုအတူကိုထညျ့သှငျးခဲ့သညျ။ စမ်းသပ်ချက်စဉ်အတွင်းတိရိစ္ဆာန်များပထမဦးဆုံး NAc အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့သည့်ကာလအတွင်းတစ်ဦး 45 မိ preinjection ကာလများအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် D1 အဲဒီ receptor ရန် SCH23390 ဒါမှမဟုတ် D2 /3ရန် raclopride အဆိုပါ NAc သို့မြန်မာနိုင်ငံသသို့မဟုတ်တဖက်သတ်ထုံမွှန်းခဲ့သည်; တိရစ္ဆာန်များတို့သည်ပြုတ်ရည်တစ်လျှောက်လုံးအနည်းဆုံး 75 မိနောက်မှများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်တာဝန်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်အတူအခန်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်း (yun et al ။ , 2004; Nicola, 2010), အ NAc core ကိုသို့ဖြစ်စေရန်၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တာဟာသိသိသာသာတိရစ္ဆာန် (တုန့်ပြန်သော DSs ၏အချိုးအစားကိုလျှော့ချသဖန်းသီး။ 1C, မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ခြေရာတွေ) နှင့် session များ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ဗီဒီယိုခြေရာခံခြင်းအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ရွေ့လျားအစပျိုးဖို့အောင်းနေချိန်တိုးလာ (သဖန်းသီး။ 1Dမီးခိုးရောင်) ခြေရာတွေ dashed ။ ဆနျ့ကငျြ, တူညီတဲ့အညွှန်းများကိုတစ်ဖက်သတ်တာဟာ (DS တုံ့ပြန်မှုအချိုးမသက်ရောက်ခဲ့သဖန်းသီး။ 1Cအလင်းမီးခိုးရောင်ခြေရာတွေ), DS စတင်ခြင်းပြီးနောက်လှုပ်ရှားမှုစတင်ရန်အောင်းနေချိန် (သဖန်းသီး။ 1D, () အလင်းလိမ္မော်ရောင်ခြေရာတွေ dashed နှင့်အောင်းနေချိန်လီဗာချဉ်းကပ်စဉ်အတွင်းလီဗာသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုမြန်နှုန်းရောက်ရှိရန်သဖန်းသီး။ 1E,F) ။ ဤရွေ့ကားအမူအကျင့်ဒေတာတစ်ခုတည်း hemisphere အတွက် NAc dopamine နှစ်ဦးစလုံး hemisphere အတွက် D1 သို့မဟုတ် D2 /3receptors ၏ပိတ်ဆို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ချို့ယွင်းသော်လည်းအပြုအမူကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လုံလောက်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ အပြုအမူအာရုံချို့ယွင်းအခါကအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအပေါ် dopamine ရန်များ၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုအတိုင်းဤ dissociation, (နှစ်နိုင်ငံဆေးထိုး) ဟာအရေးပါတဲ့စမ်းသပ်အားသာချက်ကမ်းလှမ်းကြောင့်အားဖြင့်မဆိုပြောင်းလဲမှုများကိုကြည့်ရှုလေ့လာသောအလားအလာရှက်ကြောက်ထွက်အာဏာရ, (တစ်ဖက်သတ်ဆေးထိုး) မဖြစ်သည့်အခါ အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွင်းရန်ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုမှအလယ်တန်းဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ 322 ကြွက်များတွင် 31 မှတ်တမ်းတင် / ဆေးထိုးအစည်းအဝေးများအတွက် 12 NAc အာရုံခံကနေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်ထားသောအာရုံခံ၏ 45% သိသိသာသာ DS တင်ဆက်မှုအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားစိတ်လှုပ်ရှား (ယခင်ကအစီရင်ခံသူတို့အားအလားတူဂုဏ်သတ္တိများပြyun et al ။ , 2004; Nicola et al ။ , 2004a; Ambroggi et al ။ , 2011; McGinty et al ။ , 2013; Morrison နှင့် Nicola, 2014): သူတို့ (NSS ကိုအပြီးအားဖြင့် evoked တွေထက်ပိုကြီးတဲ့ခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 2A); သူတို့ (cue စတင်ခြင်း (~120 ms) အပြီးတိုတောင်းအောင်းနေချိန်မှာစတင်ခဲ့ပြီးလီဗာ-ညွှန်ကြားလှုပ်ရှားမှုစတင်မတိုင်မီဖြစ်ပွားခဲ့သဖန်းသီး။ 2B); နှင့်၎င်းတို့၏ပြင်းအားကို (လီဗာဖို့တစ်ဦးအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေ, လှုပ်ရှားမှုစတင်အောင်းနေချိန်နှင့်နီးကပ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်McGinty et al ။ , 2013; သဖန်းသီး။ 2ကို C-E).
ဖြစ်စေအဆိုပါ D1or D2 / D3 ရန်၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ပြုတ်ရည် DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှား၏ပြင်းအားတစ်ဦးချွန်ထက်လျှော့ချရေးစေ၏။ နှစ်ခုဥပမာအာရုံခံ (မှာပြထားတဲ့အတိုင်းသဖန်းသီး။ 3A,C), ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအရှိဆုံးကတော့ထိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ cue-evoked ချဉ်းကပ်အပြုအမူ (ထဲတွင်အလုပျသလျှော့ချဖို့သက်ဆိုင်ရာ, ချက်ချင်းပြုတ်ရည်ပြီးနောက်မိနစ်အသံထွက်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 3A,Cပြာ rasterizer နှင့် Histogram) ။ အဆိုပါအမူအကျင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြန်လည်ကောင်းမွန်သောအခါ, ပစ်ခတ်ရန်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာပြန်လည်ကောင်းမွန် (သဖန်းသီး။ 3A,Cအနက်ရောင် rasterizer နှင့် Histogram) ။ ရလဒ်တွေကိုဒီပုံစံ cue-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံဖြတ်ပြီးတသမတ်တည်းခဲ့ (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5A, , 66A, နှစ် ဦး နှစ်ဖက် histograms နှင့် whisker ကွက်) ။ ဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်လီဗာချဉ်းကပ်လှုပ်ရှားမှု၏သန်စွမ်းမှုကိုသတ်မှတ်သည်ဟူသောယူဆချက်ကိုထောက်ခံခြင်း၊ ကြိုတင်ထိုးသွင်းခြင်းကာလအတွင်း cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ပမာဏသည်တိရိစ္ဆာန်၏ latency ကိုလီဗာသို့ရောက်ရှိရန်ခန့်မှန်းခဲ့သည် (သဖန်းသီး။ 4A,C,) ထားခဲ့တယ်။ နှစ်နိုင်ငံ D1 သို့မဟုတ် D2 ရန်ဆေးထိုးပြီးနောက်ဤ latency သိသိသာသာအဆိုပါ 10 s ကို cue တင်ဆက်မှုအတွင်းမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန် (ရှိကွောငျးကိုဒါမွငျ့မားမကြာခဏပိုမိုမြင့်မားတန်ဖိုးများပြောင်းလဲခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 4A,C,) left နှင့်ညာဘက်အောင်းနေချိန်ဖြန့်ဝေ။ cue-evoked ပစ်ခတ်ရန်ထိုရန်လျှော့ချခဲ့သည်သော်လည်းသိသိသာသာ, က (ထို postinjection နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလအတွင်းအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများသန်စွမ်းကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဆက်သဖန်းသီး။ 4A,Cညာဘက်အကြောင်းအရာအကြမ်းကွက်) ။ တစ်ဦး dopamine ရန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပစ်ခတ်ရန်အတွက်လျော့ချရေး သာ. , သာ. အဆိုပါအောင်းနေချိန်ဟာသောလီဗာနှင့်အောက်ပိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေရောက်ရှိဖို့: ဒီလေ့လာရေးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောသက်ရောက်မှုစမ်း-by-ရုံးတင်စစ်ဆေးအခြေခံပေါ်မှာဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်ကွောငျးဖျောပွသ တိရိစ္ဆာန်မှာရှိသမျှကိုလီဗာရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဒီစမ်းသပ်မှု-by-ရုံးတင်စစ်ဆေးဆက်စပ်မှုများ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအကဲဖြတ်ရန်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီ cue-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံဆဲလျအဘို့, စိတ်လှုပ်ရှားများ၏ပြင်းအားနှင့်လီဗာကိုနှိပ်ဖို့အောင်းနေချိန်အကြား Spearman ရာထူးဆက်စပ်မှုတွက်ချက်။ ကျနော်တို့အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်ရှိခဲ့သည့်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ 10 s ကိုတစ်ဦးအောင်းနေချိန်တာဝန်ပေးအပ်; ဤအစမ်းသပ်မှုများတွင်အောင်းနေချိန်ထို့ကြောင့်အမြင့်ဆုံးရာထူးမှာချည်ထားသောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေါင်းစပ် postinjection / ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ၌သူတို့နှင့်အတူအဆိုပါ preinjection ကာလအတွင်းဆက်စပ်မှုကိန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါကျနော်တို့ကြောင်းအားလုံးနီးပါးတွေ့၏ (Data မပြပါ။ တစ်ဦး DS-cued လီဗာတုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲစမ်းသပ်မှုတွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကနေချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်လျှင်အလားတူရလာဒ်များရယူခဲ့ကြသည်) အဆိုပါကိန်းနှစ်ခုစလုံးကာလအတွက်အနုတ်လက္ခဏာရှိကြ၏။ ထို့ပြင်ရန်အတွက်ပျမ်းမျှကိန်းအပေါ်မျှသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်သို့မဟုတ် ပို. ပင်အနုတ်လက္ခဏာတန်ဖိုးများ (ဆီသို့ဖြန့်ဖြူးပြောင်းရွှေ့ဖြစ်စေသဖန်းသီး။ 4B,D) ။ ထို့ကြောင့် cue-excited neuron များ၏လူ ဦး ရေသည်အပြုအမူဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကြာချိန်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရုံသာမကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်ရန်သူဖြစ်ရခြင်း၏တုန့်ပြန်မှုနှေးကွေးမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်ထိုစမ်းသပ်မှုအပေါ်ရန်ဘက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ပြင်းထန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရလဒ်သည် cue အားဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်တုန့်ပြန်မှု၏အားဖြည့်မှုကိုသတ်မှတ်ရာတွင် endogenous dopamine အတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သောအခန်းကဏ္ for အတွက်ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။ dopamine သည် NAc အာရုံခံဆဲလ်များ၏ cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတိုးစေသည်၊
ဤအရလဒ်များတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအနက်ကိုလျှော့ cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဟာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မျှသာခြေရာခံ (သို့မဟုတ်မျှော်မှန်း) ဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှော့အပြုအမူ responding- ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်သည့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဒါပေမယ့်အဲဒါကိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်မပေးပါ။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, ထို့နောက်သူတို့အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမထိုကဲ့သို့သောလမ်းထဲမှာရန်၏လျှောက်လွှာလျှော့ချ cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမှုမပေးသင့်ပါတယ်။ သို့သော်နှစ်ခုဥပမာအာရုံခံ (အတွင်းသရုပ်ပြအဖြစ်သဖန်းသီး။ 3B,D), ဖြစ်စေ D1or D2 / D3 ရန်၏တစ်ဖက်သတ်ထိုးသိသိသာသာတစ်ဖက်သတ်ထိုးအပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲမပြုခဲ့သော်လည်း cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား၏ပြင်းအားကိုလျှော့ချ။ အဆိုပါထိုးသွင်း NAc (တှငျမှတျတမျးတငျထားသ cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှရသောအခါအလားတူရလာဒ်များရယူခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5A, , 66A, Ipsilateral Histogram); အပြင်, ပျမ်းမျှ data ကိုဆေးထိုးဖို့ NAc contralateral တှငျမှတျတမျးတငျထားသအာရုံခံအတွက် cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား (ထိခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းပြသသင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5A, , 66A, Contralateral Histogram) ။ အဆိုပါထိုးဖို့ cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား ipsilateral အတွက်လျှော့ချရေးအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်သေးငယ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ကျနော်တို့တိရစ္ဆာန်မျှလီဗာစာနယ်ဇင်းတုံ့ပြန်မှုကိုဖန်ဆင်းသောလူအပေါင်းတို့စမ်းသပ်မှုတွေဖယ်ထုတ်ပြီးပြီးနောက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထပ်ခါတလဲလဲ; အလားတူရလာဒ်များဒေတာမှမပြ (ရရှိခဲ့ကြသည် ဟူ. ၎င်း, p <0.05 D1 နှင့် D2 ရန်ဘက်နှစ်မျိုးလုံးအတွက် Wilcoxon) ။ ဤရလဒ်သည် cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆန့်ကျင်ရန်သွေးဆောင်မှုလျော့နည်းစေခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ဖွယ်မရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား၏ယာယီဂုဏ်သတ္တိများအာရုံခံဖြတ်ပြီးအတော်လေးဆင်တူကြပေမဲ့, cue စတင်ခြင်းပြီးနောက်ပြုခဲ့ (ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားထက်နောက်ပိုင်းတွင်စတင်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းကျပုံစံအချိန်သင်တန်းများပြပိုမိုကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5B, , 66B) ။ ပြုခဲ့၏လေ့လာဆန်းစစ် (နှင့်တစ်ဦးအတိုင်းအတာအထိ, စိတ်လှုပ်ရှား) တစ်ခုတည်းအချိန်ပြတင်းပေါက်အာရုံစိုက်ကြောင်းထို့ကြောင့် signal ကိုတစ်သိသာသောအဘို့ကိုလက်လွတ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပွငျစံစာရင်းအင်းထောက်လှမ်းနည်းလမ်းများတသမတ်တည်းအများအပြား NAc အာရုံခံ၏အပါအဝင်အလွန်နိမ့် Basal ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများမှလျှောက်လျော့နည်းခွဲခြားသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ အဆိုပါကိစ္စရပ်များကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်, ကျွန်တော်တို့ဟာ quantified ရသောတစ်ဦးထက်ပိုအားလုံးပါဝင်နိုင်ချဉ်းကပ်နည်းကို ယူ. တိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောအာရုံခံဆဲလျအတွက် 50 ms postcue အချိန် bins အဘို့, အာအိုစီ AUC ယင်းဘင်နှင့် precue အခြေခံအတွက်ပစ်ခတ်ရန်အကြားခြားနားချက်ကိုကိုယ်စားပြု။ DS စတင်ခြင်းမှ aligned အချိန် bins အတွက် AUC တန်ဖိုးများအပူမြေပုံ (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5B, , 66BD1 နှင့် D2 ရန်၏) နှစ်နိုင်ငံနှင့် ipsilateral (သို့သော် contralateral မဟုတ်ထိုးနီးပါးတိုင်း cue-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံဆဲလျအတွက်အသံထွက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်၏တစ်ခုလုံးကိုအချိန်သင်တန်းကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ခံခဲ့ရပြီးနောက်) DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားအတွက်လျှော့ချရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဆနျ့ကငျြ, DS စတင်ခြင်းပြီးနောက်ပြုခဲ့လျှော့ချမခံခဲ့ရပါ။ ဤအသက်ရောက်မှုများကိုတွက်ချက်ရန်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီ AUC တန်ဖိုး AUC AUCs ၏ဖြန့်ဝေထံမှနမူနာခဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့ bootstrapped p တန်ဖိုးကိုကွန်ပျူတာအားဖြင့်အခြေခံကနေသိသိသာသာခြားနားချက်ညွှန်ပြခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထားကျပန်းကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အခြေခံနှင့် postcue ဘင်ပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများ shuffled (Materials မြင် နည်းလမ်းများ) ။ သိသာထင်ရှားသောပြအာရုံခံ၏အချိုးအစား၏မြေကွက်များကပြထားတဲ့အတိုင်း (p <0.05) DS စတင်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီတစ်ခုချင်းစီကိုဘင်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်တားစီး (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5C, , 66Cတစ်ဦးချင်းစီကော်လံအတွက်မြေကွက်) left, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ဒါပေမယ့်မရပြုခဲ့၏အစိတ်အပိုင်းသည်ရန်၏နှစ်နိုင်ငံနှင့် ipsilateral ထိုးခြင်းဖြင့်လျှော့ချခဲ့သည်။ ဤသည်အနက် (တစ်ခုလုံးကို 1 s ကို Post-DS ဝင်းဒိုးကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ဘယျလိုမှမ bins ၏အချိုးအစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ကစာရင်းအင်းအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5C, , 66C,) ကွက်စက်။ ထို့ကြောင့် DS စတင်ခြင်းပြီးနောက်စိတ်လှုပ်ရှား D1 နှင့် D2 ရန်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်လျှော့ချ, ဒါပေမယ့်ပြုခဲ့ကြဘူးခဲ့သည်။
အမှန်စင်စစ်သိသိသာသာတားစီးဖေါ်ပြခြင်းအာရုံခံ၏နံပါတ် (ဆေးထိုးအချို့အမျိုးအစားများကိုအပြီးတိုးပွားလာခဲ့သည်သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5B,C, , 66B,C) ။ ဤရွေ့ကားပေါ်ထွက်လာသောပြုခဲ့ထိုကြောင့်သူတို့သည်တသမတ်တည်းမဟုတ်ကြသောကြောင့်, (ဥပမာ, သူတို့ကနှစ်နိုင်ငံနှင့် contralateral, ဒါပေမယ့်မရ ipsilateral D1 ရန်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် ipsilateral ပြီးနောက်သော်လည်းမနှစ်နိုင်ငံ D2 ရန်ဆေးထိုးပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်) နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူရန်တာဟာများ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများလှူဒါန်းခဲ့ကြမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီး သူတို့ကရန်များ၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြကြဘူး။ ထို့ပြင်ဤနှောင်းပိုင်းကပြုခဲ့, DS စတင်ခြင်းပြီးနောက်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေ, ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေ၏ ~600% ပြီးသား (အစပျိုးခဲ့သောမှာအချိန်အထင်ရှားဆုံး ~50 ms ခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 2B) ။ အကျိုးဆက်ကြောင့်ပေါ်ထွက်လာသောပြုခဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်ချဉ်းကပ်မှုစတင်အောင်းနေချိန်သို့မဟုတ်လျှော့ချရေးအတွက်ရန်-သွေးဆောင်တိုးဖို့လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ Intriguingly, အရေးပေါ်ပြုခဲ့၏ကြီးစွာသောအများစုပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှား (နှစ်နိုင်ငံ D1 ရန်၏အဆုံးဆီသို့, DS-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်: 14 / 17 အာရုံခံ, 82%; ipsilateral D2 ရန်: 11 / 16 အာရုံခံ, 69%; သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 5B,C, , 66B,C), သူတို့က excitatory တုံ့ပြန်မှုများ၏ရန်-သွေးဆောင်လျှော့ချခြင်းဖြင့် unmasked နှင့် DS-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများစတင်မှကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သောအယူအဆထောက်ပံ့ခဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ကိုက်ညီ။
ခဲလီဗာ-စာနယ်ဇင်းတုံ့ပြန်မှုရူးနှမ်းရာ NS တင်ပြချက်များ, (သဖန်းသီး။ 1B), (ပု DS အားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့အတူတူပင်အာရုံခံအတွက်သေးငယ်တဲ့ဒါပေမယ့်တသမတ်တည်းစိတ်လှုပ်ရှား evokedသဖန်းသီး။ 2A) ။ အံ့သြစရာကောင်းတာက NS-evoked စိတ်လှုပ်ရှား (တစ်ခုခုပြင်းအားထဲမှာ, D1 ရန်လျှော့ချမသဖန်းသီး။ 7A) သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံ၏အရေအတွက် (သဖန်းသီး။ 7B,C) ။ ဆနျ့ကငျြ, D2 ရန်ဆေးထိုး (NS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားများ၏ပြင်းအားနှင့်အရေအတွက်ကနှစ်ဦးစလုံးလျှော့ချသဖန်းသီး။ 8) ။ NS-evoked ပြုခဲ့ (ဖြစ်စေရန်လျှော့ချမသင်္ဘောသဖန်းသီး။ 7B,C, , 88B,C) ။ D1 အဲဒီ receptor activation ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှတုံ့ပြန်မှုဘို့လိုအပ်ပါသည်သော်လည်းထိုကွောငျ့, ဤအခြေအနေများအောက်တွင် D2 အဲဒီ receptor ကို Activation, အဓိကဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ကြီးမားသော-ပြင်းအားစိတ်လှုပ်ရှားထုတ်လုပ်ရန် NAc အာရုံခံအဘို့လိုအပ်ပါသည်။
ကျနော်တို့နှစ်နိုင်ငံတာဟာကြောင့်အားဖြည့်ရန်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်၏ hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဦးအာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်၏ပြတ်တောက်မှပါပြီနိုင်ပြီးနောက်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူလျှော့ချသောဖြစ်နိုင်ခြေဆင်ခြင်၏။ ထိုသို့သောဖြစ်စဉ်များ (sucrose ၏စားသုံးမှုစဉ်အတွင်းဘယျလိုမှသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြောင်း NAc အာရုံခံ၏ subpopulations ပါဝင်နိုင်Nicola et al ။ , 2004b; Roitman et al ။ , 2005; Taha နှင့်လယ်ကွင်းများ, 2005) ။ တိရိစ္ဆာန်များသည်တစ်ဖက်သတ်ရန်ငြိုးထားခြင်းပြီးနောက်ဆုလာဘ်ကိုဆက်လက်ရရှိနေသောကြောင့်စားသုံးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုသည် dopamine receptor activation ပေါ်တွင်မူတည်ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဆုလာဘ်သိုလှောင်ရုံထဲသို့တိရိစ္ဆာန်ဝင်ပြီးနောက် ၅ ရက်အတွင်းပစ်ခတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။Nicola, 2010) ။ အာအိုစီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုခြင်း, ကျနော်တို့ 200 s ကို precue အခြေခံအားဤပြတင်းပေါက်အတွင်း 10 ms bins အတွက်ပစ်ခတ်နှိုင်းယှဉ်; ရလဒ် AUC တန်ဖိုးများအပူမြေပုံ (ဆေးထိုးဖို့ ipsilateral သို့မဟုတ် contralateral ဖြစ်စေရန်ဆေးထိုး၏အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုကိုပြသသဖန်းသီး။ 9A,C) ။ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ဘယျလိုမှမအာရုံခံ၏အချိုးအစားဟာရန်ကြောင့်ထိခိုက်မ (သဖန်းသီး။ 9B,D), ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြောင့်စားသုံးမှု-related စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ပြုခဲ့ dopamine အပေါ်မူတည်မအကြံပြုခြင်း။ ကျနော်တို့ 50 ms bins (Data ပြမပါ) ကိုသုံးပြီးတူညီတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေတဲ့အခါမှာအလားတူရလာဒ်များရယူခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိရလဒ်များရန် (ဆေးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးမော်တော်ယာဉ်အချို့အစိတ်အပိုင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဥပမာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်အယှက်) ထက်အခြားအချို့အချက်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့ငါတို့သည်အချို့သောစမ်းသပ်ချက်အတွက်ဆားထိုးသွင်း။ ဥပမာတစ်ခုအာရုံခံဆဲလျသဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်း (သဖန်းသီး။ 10A) နှင့် cue-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တို့က (သဖန်းသီး။ 10B), DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဆားဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲမဟုတ်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, NS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လည်း (မထိခိုက်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 10C) ။ ထိုမှတပါး, ဆားဆေးထိုးခြင်း (DS ပြီးနောက်သိသိသာသာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တားစီးဖေါ်ပြခြင်းအာရုံခံ၏အချိုးအစားသို့မဟုတ် NS စတင်ခြင်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဘူးသဖန်းသီး။ 10: D-G).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ dopamine အဲဒီ receptor activation NAc အာရုံခံ၏အခြေခံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများမှပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် cued ချဉ်းကပ်အပြုအမူများအတွက်အလိုလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိမေးခဲ့တယ်။ ဒီအယူအဆတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိသော, DS-စိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်အခြား NAc အာရုံခံ (ဖြစ်စေ၏အခြေခံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများအပေါ် D1 သို့မဟုတ် D2 ရန်သော်လည်းကောင်းမရှိသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 10H,I).
Nissl-စွန်းကဏ္ဍများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားမှုကိုအဆိုပါ NAc ဖို့သတ်ခဲ့ညွှန်ပြ။ ပုံ 11 အဆိုပါ cannulae များ၏ခန့်မှန်းတည်နေရာ, တစ်ခုချင်းစီကြွက်အဘို့, ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ NAc core ကိုအားလုံးကိစ္စများတွင်ပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရပေမယ့်လည်းအချို့မှတ်တမ်းတင်ထားသောအာရုံခံ shell ကိုအတွက်ပါပြီဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
dopamine အဲဒီ receptor activation အလှည့်အတွက်တ္ထု-ဆက်စပ်ဆုချဖို့ချဉ်းကပ်မှု၏ရေတိုအောင်းနေချိန်စတင်မြှင့်တင်ရန်အရာ cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်: ဤတွေ့ရှိချက် NAc dopamine သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူကိုအားပေးအားမြှောက်ခွနေတဲ့ယန္တရားအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါကနိဂုံးချုပ်ပြင်းပြင်းထန်ထန် (နှစ်နိုင်ငံ dopamine ရန်ဆေးထိုးနှစ်ဦးစလုံးလှုပ်ရှားမှုအစပျိုးဖို့အောင်းနေချိန်တိုးပွားလာသောလေ့လာရေးကထောက်ခံနေသည်သဖန်းသီး။ 1D) နှင့် cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား၏ပြင်းအားကိုလျှော့ချ (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 33​-6) ။ တစ်ဖက်သတ်ထိုး DS-cued အပြုအမူကိုပြောင်းလဲမပေးခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှော့ချ cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား (ချို့ယွင်းအပြုအမူ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ရပြီမနိုင်သဖန်းသီး။ 1ကို C-F ကိုအဆိုပါထိုးသွင်းတစ်ရှူးအတွက်), သေးအလှနျလျှော့ချ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှား (သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 3B,D, , 5,5, , 6) .6) ။ ဤရွေ့ကားစိတ်လှုပ်ရှား (ထိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောအာရုံခံ၏ 45% အတွက်ဖြစ်ပေါ်) ကို NAc အတွက်မြင်သာထင်သာအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု ရှိ. , သူတို့နှစ်ဦးစလုံး (လှုပ်ရှားမှုစတင်ခြင်းရှေ့ပြေးသဖန်းသီး။ 2B) နှင့်တိုတောင်းအောင်းနေချိန်နှင့်အတူစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ် သာ. ကြီးမြတ်ပစ်ခတ်ရန်နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုစတင်အောင်းနေချိန်ဟောကိန်းထုတ် (သဖန်းသီး။ 2D()McGinty et al ။ , 2013; Morrison နှင့် Nicola, 2014) ။ ထို့ကြောင့်, cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားကျန်းမာသန်စွမ်းဆုလာဘ်ရှာဘို့မှီခိုနှင့်လိုအပ်သော dopamine နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုကြောင်း cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားကိုသရုပ်ပြသဖြင့်, NAc အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုမျှမကအခြားပုံစံဖွယ်ရှိရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားလှုပ်ရှားမှုတွေ၏အောင်းနေချိန်သတ်မှတ်သောအာရုံကြော circuit ကိုတစ်ဦးဝေဖန် signal ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကနိဂုံးချုပ်ပုရန် cue-evoked ပြုခဲ့လျှော့ချခြင်းမရှိဘဲ cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားလျော့သောလေ့လာရေးအနေဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းစားသုံးမှု-ဆက်စပ်ပစ်ခတ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်အခြေခံပစ်ခတ်ရန်နှုန်းထားများဆုချ။ ထို့ပြင်ရန်၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ထိုးသည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လျှော့ချအတွက်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးသောအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေ (သူတို့အကြီးမြတ်ဆုံးအမူအကျင့်ချွတ်ယွင်းစေသောသူတို့အားပေးသောရှိကြ၏သဖန်းသီး။ 4), ပြင်းပြင်းထန်ထန်အာရုံခံ encoding ကအချို့သောအခြားမတွေ့ရှိရပြောင်းလဲမှုအမူအကျင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်သောဖြစ်နိုင်ခြေဆန့်ကျင်ငြင်းခုံ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များသည် NAc တွင် dopamine receptor activation ၏လှုပ်ရှားမှု၊ cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားမှုပမာဏနှင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိရန်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ရန်တိရိစ္ဆာန်၏အချိန်ကာလကိုအခိုင်အမာချိတ်ဆက်ထားသည်။
ယခင်အလုပ် (စ NAc cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ပြုခဲ့လျှော့ချကြောင်း VTA inactivation cued ချဉ်းကပ်အပြုအမူပြထံမှတိရိစ္ဆာန်များတားဆီးကြောင်းပြသyun et al ။ , 2004) ။ သို့သျောထိုလေ့လာမှုကဤအပြောင်းအလဲများတစ်သွယ်ဝိုက် circuit ကိုအကျိုးသက်ရောက်သောဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ရှားမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဤတွင်ကျနော်တို့ရန်သက်ရောက်မှုများ NAc ၏အထက်ပိုင်း dopamine ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေဖျက်သိမ်းရေး, ထိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောအာရုံခံမှဒေသခံ dopamine receptors cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဘို့လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဆနျ့ကငျြ, cue-evoked ပြုခဲ့ VTA inactivation လျှော့ချခဲ့သည်သော်လည်း (yun et al ။ , 2004), သူတို့ကဒေသခံ dopamine ရန်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်လျှော့ချနှင့်ထိုပြုခဲ့သည့် NAc အတွင်း dopamine တစ်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်ဖွယ်မရှိပေမခံခဲ့ရပါ။
DS-evoked ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများနှင့် DS-evoked ပစ်ခတ်ရန်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ် D1 နှင့် D2 ရန်များ၏သက်ရောက်မှုများသိသိသာသာအလားတူခဲ့ကြသည်။ ယင်းတွေ့ရှိချက် D1 နှင့် D2 ရန်ငါတို့ဆင်တူဆေးများမှာနီးပါးချွတ်စွပ်အရွယ်အစားအမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် NAc microinjection စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုရှည်လျားသောလိုင်း (နှင့်ကိုက်ညီများမှာHiroi နှင့်အဖြူရောင်, 1991; Ozer et al ။ , 1997; Koch et al ။ , 2000; Eiler et al ။ , 2006; Pezze et al ။ , 2007; Lex နှင့် Hauber, 2008; Liao, 2008; Nicola, 2010; ရှင် et al ။ , 2010; Haghparast et al ။ , 2012) ။ ဤရလဒ်သည်အတူတကွသက်ရောက်မှု (မီလီမီတာ) စောငျ့ရှောကျရန်လိုအပ်ကြောင်း Injection နဲ့သူတို့ရဲ့ပစ်မှတ် (nm) အတွက်မူးယစ်ဆေးများဆှဖှေဲ့အတွက်ရန်အာရုံစူးစိုက်မှုအကြားဆနျ့ကငျြဘနှင့်တကွ, မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများတိကျတဲ့ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသို့ခေါ်ဆိုပါ။ အဲဒီ receptor မှာထိရောက်သောအာရုံစူးစိုက်မှုကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပျံ့နှံ့, ဇီဝြဖစ်ခြင်း, ဓာတ်တိုးဖို့ထိုးသွင်းအာရုံစူးစိုက်မှုထက်သိသိသာသာနိမ့်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိပေမဲ့အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ပေါင်းစပ်ထိရောက်မှုနှင့်အချိန်သင်တန်းမသိနိုင်ပါဘူး။ ထိုကွောငျ့, တဦးတည်းပုံမှန်ဖြစ်နိုင်ခြေ SCH23390 နှင့် raclopride များ၏အမူအကျင့်များနှင့် electrophysiological သက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှာအားလုံး dopamine အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ကြသည်မဟုတ်ကြောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသော receptors binding နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားအချက်များကဤဖြစ်နိုင်ခြေဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်။ Cue-evoked ချဉ်းကပ်အပြုအမူကို (NAc သို့ SCH23390 နှင့် raclopride အသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်းကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ် dopamine အဲဒီ receptor ရန် flupenthixol ၏ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သာပိတ်ထားသည်di Ciano et al ။ , 2001; Saunders နှင့်ရော်ဘင်ဆင်, 2012), အ VTA ၏ inactivation အားဖြင့် (yun et al ။ , 2004) နှင့် 6-hydroxydopamine အတူ NAc ၏တွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့် (ပါကင် et al ။ , 2002), အရာရွေးချယ် catecholaminergic အမျှင်ဦးသေဆုံး။ ထို့အပြင်တစ်ဦး dopamine reuptake blocker ၏ NAc ဆေးထိုး, တစ်ဦး D1 သို့မဟုတ် D2 အဲဒီ receptor agonist ဒါမှမဟုတ် dopamine လွှတ်ပေးရန်စိတ်ကြွဆေး (cued ချဉ်းကပ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေWyvell နှင့် Berridge, 2000; Nicola et al ။ , 2005; du Hoffman ဟာနှင့် Nicola, 2013) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ VTA dopamine အာရုံခံ (ခြော dopamine အာရုံခံဆဲလျ activation ခြင်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားတစ်ဦးအမူအကျင့်) ၏ optogenetic Self-stimulation (ဒီနေရာမှာအသုံးပြုခဲ့သူတို့အားအလားတူဆေးများမှာ NAc သို့ SCH23390 ၏ဆေးထိုးသို့မဟုတ် raclopride အားဖြင့် attenuated ဖြစ်ပါတယ်Steinberg et al ။ , 2014) ။ ဒါဟာ SCH23390 နှင့် raclopride ပိတ်ပင်တားဆီးမှု endogenous dopamine ၏ဆိုးကျိုးများအားပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ချဉ်းကပ် cued ကြောင်း positing မပြုဘဲ, ဤရလဒ်အသီးအသီးအဘို့အကောင့်နိုင်မယ့်ရိုးရှင်းတဲ့ယန္တရား၏ပဋိသန္ဓေ ယူ. ရန်ခက်ခဲသည်။
တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်ခြေဟာရန်အဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ် receptors, ဒါပေမယ့်ချွတ်-ပစ်မှတ် dopamine receptors မသာခညျြနှောငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ 10 μmသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်း၏ပြင်းအားမှာ raclopride D1 ကဲ့သို့ receptors (ခညျြနှောငျပါဘူးခန်းမ et al ။ , 1986); ပိုမိုမြင့်မားသောပြင်းအားကိုစမ်းသပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ထို့ကြောင့်, raclopride အထူးသဖြင့်ပျံ့နှံ့, ဇီဝြဖစ်ခြင်း, ဓာတ်တိုးပြီးနောက်, ပင်ကိုအခြားသူများကအသုံးပြုတဲ့မီလီမီတာ Injection ပြင်းအားမှာ D2 / D3 receptors များအတွက်တိကျသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ D23390 ကဲ့သို့ receptors ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ် binding အဆိုပါ SCH2 ၏ခန့်မှန်းချက် (1 နှင့်5μmအကြားအထိBourne, 2001; Mottola et al ။ , 2002); ဤအတန်ဖိုးများ SCH23390 အဆိုပါထိုးသွင်းပြင်းအားမှာ D2 / D3 receptors ချည်နှောင်ကြောင်းအကြံပြုပေမယ့်, dopamine အားဖြင့် D23390 ကဲ့သို့ receptors ၏ activation ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက် SCH2 ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ထိရောက်မှုမသိနိုင်ပါဘူး။ SCH23390 သော်လည်း NS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားလျှော့ချ raclopride ကြောင့်ကျွန်တော်တို့၏လေ့လာရေးမူးယစ်ဆေးကွဲပြားခြားနားသော receptors မှာပြုမူ, ဒါပေမယ့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကသူတို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်သရုပ်ပြပါဘူးသောစိတ်ကူးကို support မပေးခဲ့ပါဘူး။ ပင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများ DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားလျှော့ချရန်နှစ်ဦးစလုံးအဲဒီ receptor အမျိုးအစားများကိုပိတ်ဆို့လျှင်မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဤ dopamine အဲဒီ receptor ၏အနည်းဆုံးပုံစံ activation DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဘို့လိုအပ်ပါသည်သောငါတို့နိဂုံးချုပ်နှင့်အတူလုံးဝကိုက်ညီပါလိမ့်မည်။ မူးယစ်ဆေးတိကျတဲ့၏မေးခွန်းကိုဖြေဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ထို့ကြောင့်, ဤမေးခွန်းကိုသာဆိုနိုင်သည် dopamine cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် cued ချဉ်းကပ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကနိဂုံးချုပ်အားနည်းနေခြင်း။
တကယ်တော့အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါး, အထူးသကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်လုပ်ရပ်လုပ်ခဲ့တယ် အကယ်. D1 နှင့် D2 / D3 antagonists ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီလျှော့ချ cue-evoked cue-စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံ၏အများစုအတွက်ပစ်ခတ်သောဤ receptors ၏ activation အတူတူပင်အာရုံခံအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့များ၏ညှိနှိုင်းပို့ဆောင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ D1 နှင့် D2 receptors အဆိုပါ NAc (မှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်များ၏အကြီးအကျယ်ခွဲခြားဆက်ဆံလူဦးရေမှာတွေ့ရှိကြသည်သွားရမည်အကြောင်းAlbin et al ။ , 1989; Gerfen et al ။ , 1990), D1 receptors ဖော်ပြကြောင်း NAc core နဲ့ shell ကိုအာရုံခံ၏သိသိသာသာအချိုးအစားကိုလည်း (D3 receptors များအတွက် mRNA ဆံ့le Moines နှင့် Bloch, 1996), အရာ raclopride အပါအဝင် D2 ရန်ကပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ dopamine D1 သို့မဟုတ် D3 / 1 ရန် (ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့မည်ဖြစ်ကြောင်းများ၏ညှိနှိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအားဖြင့် NAc အာရုံခံအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမြှင့်တင်ရန်နိုင်မထွက်ရ D2 နှင့် D3 receptors ၏ Coexpression အလားအလာယန္တရားကိုထောက်ပံ့ပေးSchwartz et al ။ , 1998) ။ တနည်းအားဖြင့် (သို့မဟုတ်အပြင်), D1 နှင့် D2 (နှင့် / သို့မဟုတ် D3) receptors အကြားအပြန်အလှန်ဒေသခံဆားကစ်အဆင့်မှာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ (goto နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005; Gerfen နှင့် Surmeier, 2011) ။ ဥပမာ, dopamine (NAc အာရုံခံပေါ်သို့ဂါဘမြို့သားလွှတ်ပေးရန်လျှော့ချရန် D1 receptors မှာပြုမူNicola နှင့် Malenka, 1997; Hjelmstad, 2004), spiny အာရုံခံအပေါ် D2 / D3 receptors ၏ activation နှင့်အတူဖျော်ဖြေပွဲအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမြှင့်တင်ရန်နိုင်ကြောင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု (Hopf et al ။ , 2003) ။ အထူးသ, ထိုယန္တယား dopamine တိုက်ရိုက် NAc အာရုံခံ excite တော်မမူကြောင်းအပြုသဘောဆောင်ပေမယ့်အစား glutamatergic input ကိုတုံ့ပြန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားတိုးပွါး; cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား dopamine ရန်အသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်း basolateral amygdala ၏ inactivation နှင့် prefrontal cortex အားဖြင့်မဟုတ်ပဲပိတ်ဆို့ထားသည်အဘယ်ကြောင့်ဟူမူကား, သူတို့ (ရှင်းပြနိုင်Ambroggi et al ။ , 2008; Ishikawa et al ။ , 2008), ရာနှစ်ဦးစလုံး NAc မှ glutamatergic စီမံချက်များပေးပို့ (Brog et al ။ , 1993).
SCH23390 နှင့် raclopride သက်ရောက်မှုအကြားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု phasic နှင့်လုပ်သူများ dopamine နဲ့ပတ်သက်တဲ့နှစ်ခုခြားနားအာရုံကြောယန္တရားများ၏ရလဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ (D1 နှင့် D2 / D3 ရန်နှစ်ဦးစလုံး DS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားလျှော့ချပေမယ့်တူညီတဲ့အာရုံခံအတွက်ဖြစ်ပေါ်သေးငယ်တဲ့ NS-evoked စိတ်လှုပ်ရှားသာ D2 / D3 ရန်လျှော့ချခဲ့လို့သင်္ဘောသဖန်းသီး။ 8, , 9), 9), က dopamine D1 / D2 receptors မှတဆင့် (သူတို့တစ်တွေအဖိုးတန်ရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဖြစ်စေမ) D3 receptors ၏ activation မှတဆင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတန်ဖိုး encoding ကအားပေးအားမြှောက်, ဒါပေမယ့်အားလုံးတွေကိုမှပစ်ခတ်ရန်တုံ့ပြန်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ပုံရသည်။ ဤသည်တို့ကြောင့် သာ. phasic dopamine မှယာယီ (ကြားနေတွေကိုထက်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အားဖြင့် NAc အတွက်ရူးနှမ်းနိုင်Phillips က et al ။ , 2003; Roitman et al ။ , 2004) ။ D2 /3receptors D1 receptors ထက် dopamine များအတွက်ပိုမိုမြင့်မားဆှဖှေဲ့ရှိသည်ကြောင့်ဆုလာဘ်-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် DSs D2 receptors ကိုသက်ဝင်ဖို့လုံလောက်တဲ့မြင့်မားဖို့ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုခြီးမွှောစခွေငျးငှါသော်လည်း, အသေးစား NS-evoked dopamine ယာယီသာ D3 / 1 receptors ကိုသက်ဝင်ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်နိုင်သည် (တော်ကကျေးဇူး, 1991).
တနည်းအား cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှား၏ပြင်းအားမဟုတ်ဘဲ phasic dopamine ထက်လုပ်သူများအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်သူများ dopamine အဆင့်ဆင့် (အရေးမယူများ၏အခွင့်အလမ်းကုန်ကျစရိတ်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါထို et al ။ , 2007), အားဖြင့်အော်ပရေတာစွမ်းဆောင်ရည်များသန်စွမ်း setting ။ လုံလုံလောက်လောက်မြင့်မားသောလုပ်သူများ dopamine အဆင့်ဆင့်အောင်မြင်လျှင်ထို့ကြောင့်, အလုံအလောက် dopamine receptors cue-evoked စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံချဉ်းကပ်၏အောင်းနေချိန်ကိုလျော့ချဖို့ activated ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အလားတူယန္တရားကိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကို (လိုအပ်ကြောင်း uncued အော်ပရေတာလုပ်ငန်းများကို၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမှ NAc dopamine ၏လူသိများအလှူငွေအခြေခံစခွေငျးငှါSalamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2012), dopamine ပြတ်တောက်သည့် operandum ချဉ်းကပ်ဖို့ latency တိုးပွါးရသော (Nicola, 2010) ။ အခွင့်အလမ်းစရိတ်နှင့် dopamine အဆင့်ဆင့်မြင့်မားတဲ့အခါသွယ်ဝိုက်ပြင်ပတွေကို (ဥပမာ, အလီဗာ၏ရှေ့တော်၌) သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးတွေကို (ဥပမာ, အချိန်ကိုက်သို့မဟုတ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်းမှပေါ်ထွက်လာသော) ကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် NAc အာရုံခံအားဖြင့်ချဉ်းကပ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, မခွဲခြားဘဲသီးခြား pharmacological ယန္တရား၏, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို NAc dopamine သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုအဓိကရန် NAc အာရုံခံ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြှခွငျးအားဖွငျ့ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူကိုအားပေးအားမြှောက်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဒီစိတ်လှုပ်ရှား၏ပြင်းအားတစ်ခုချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုအစပျိုးဖို့ဘာသာရပ်၏အောင်းနေချိန်သတ်မှတ်။ ဒီယန္တရားကနေတဆင့်, dopamine cued ဆုလာဘ်-ရှာ၏သန်စွမ်းခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှစ်ခုလုံးကိုထိန်းညှိ။
ဤလုပ်ငန်းကိုကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institute (DA019473, DA038412 နှင့် MH092757), Schizophrenia နှင့်စီးပွားပျက်ကပ်အပေါ်သုတေသနများအတွက်အမျိုးသားမဟာမိတ်အဖွဲ့သည် Klarman မိသားစုဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ပတေရုသအက်ဖ် McManus ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ကိုးစားလော့ထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ DRs ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အက်စ် Morrison, V. McGinty, ဃ Moorman, အက်ဖ် Ambroggi, အေ Kravitz နှင့် K. Khodakhah ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အပေါ်ထင်မြင်ချက်များသည် ဖြစ်. , အထောကျအကူဆွေးနွေးမှုများများအတွက် Nicola ဓာတ်ခွဲခန်းအဖွဲ့ဝင်များ; နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီများနှင့်ဂျေကင်။
Albin RL, Young က AB, Penney JB ။ Basal ganglia မမှန်များ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1989; 12: 366-375 ။ Doi: 10.1016 / 0166-2236 (89) 90074-X ကို။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ambroggi က F, Ishikawa တစ်ဦးက, Fields HL, Nicola သည် SM ။ Basolateral amygdala အာရုံခံစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နျူကလိယအားဖြင့်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူအာရုံခံ accumbens လွယ်ကူချောမွေ့။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 59: 648-661 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2008.07.004 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ambroggi က F, Ghazizadeh တစ်ဦးက, Nicola သည် SM, Fields HL ။ နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍမက်လုံးပေး-cue တုံ့ပြန်များနှင့်အမူအကျင့်တားစီးအတွက် core နဲ့ shell ကို accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2011; 31: 6820-6830 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.6491-10.2011 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bourne ဂျေအေ။ SCH 23390: ပထမဦးဆုံးရွေးချယ် dopamine D1 တူသောအဲဒီ receptor ရန်။ CNS မူးယစ်ဆေးဗျာ 2001; 7: 399-414 ။ Doi: 10.1111 / j.1527-3458.2001.tb00207.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Brog JS, Salyapongse တစ်ဦးက, Deutch AY, Zahm DS ။ retrogradely ပို့ဆောင် fluoro-ရွှေ immunohistochemical ထောက်လှမ်း: ကြွက် ventral striatum ၏ "accumbens" စိတျအပိုငျးအတွက် core နဲ့ shell ကို၏ afferent innervation များ၏ပုံစံများ။ J ကို comp Neurol ။ 1993; 338: 255-278 ။ Doi: 10.1002 / cne.903380209 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
di Ciano P ကို, Cardinal RN, Cowell RA, Little က SJ, Everitt BJ ။ နျူကလီးယပ်အတွက် differential NMDA ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု, AMPA / kainate နှင့် dopamine receptors pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အဓိက accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 9471-9477 ။ [PubMed]
Drai: D, Benjamini Y ကို, ကြွက်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူအတွက်ရွေ့လျားမှု၏သဘာဝအ Modes သာ၏ Golani ဗြဲစာရင်းအင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ J ကို neuroscience နည်းလမ်းများ။ 2000; 96: 119-131 ။ Doi: 10.1016 / S0165-0270 (99) 00194-6 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hoffman ဟာဂျေ, Nicola သည် SM du ။ တိုးမြှင့်နျူကလိယ dopamine တစ် cued ချဉ်းကပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်မွတ်မပြေနိုင်သောဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် accumbens ။ Soc neuroscience ။ 2013 Abstr 39.867.11 / LLL22 ။
Hoffman ဟာ J ကိုကင်မ် JJ, Nicola သည် SM du ။ ကြွက်ပြုမူ၏တူညီသောဦးနှောက်နျူကလိယထဲမှာတစ်ပြိုင်နက်ယူနစ်အသံဖမ်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးပြုတ်ရည်တစ်စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ drivable cannulated microelectrode ခင်းကျင်း။ J ကို Neurophysiol ။ 2011; 106: 1054-1064 ။ Doi: 10.1152 / jn.00349.2011 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Eiler WJ, 2nd, မာစတာ J ကို, McKay PF, Hardy L ကို, 3rd, Goergen J ကို, Mensah-Zoe ကို B ကို, Seyoum R ကို, ကွတ် J ကို, ဂျွန်ဆင် N ကို, Neal-Beliveau B ကို, ဇွန်လ HL ။ ဖက်တမင်းဆေးပြားအရက်- သာ. နှစ်သက် (P) အတွက်ဦးနှောက်ဆွဆုလာဘ် (BSR) တံခါးခုံကိုလျော့နည်းစေတယ်လေနှင့် (NP) ကြွက် -nonpreferring: D-Sub-1 နေဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်နျူကလိယ accumbens D-Sub-2 receptors ။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2006; 14: 361-376 ။ Doi: 10.1037 / 1064-1297.14.3.361 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gerfen CR, Surmeier DJ သမား။ dopamine အားဖြင့် striatal projection စနစ်များ Modulation ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2011; 34: 441-466 ။ Doi: 10.1146 / annurev-neuro-061010-113641 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gerfen CR, Engber TM, မာဟန် LC, Susel Z ကို, Chase TN, Monsma FJ, Jr က Sibley DR ။ D1 နှင့် D2 striatonigral နှင့် striatopallidal အာရုံခံ၏ dopamine အဲဒီ receptor-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ဗီဇစကားရပ်။ သိပ္ပံ။ 1990; 250: 1429-1432 ။ Doi: 10.1126 / science.2147780 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ နျူကလိယ၏ limbic နှင့် cortical drive ကို၏ Dopaminergic မော်ဂျူရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် accumbens ။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 805-812 ။ Doi: 10.1038 / nn1471 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ schizophrenia များ၏ etiology များအတွက်အယူအဆ: လုပ်သူများ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် dopamine system ကိုတုန့်ပြန်၏မော်ဂျူနှိုင်းယှဉ် Phasic ။ neuroscience ။ 1991; 41: 1-24 ။ Doi: 10.1016 / 0306-4522 (91) 90196-ဦး။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Haghparast တစ်ဦးက, Ghalandari-Shamami M က, အနျူကလိယ accumbens အတွင်း D1 / D2 dopamine receptors ၏ Hassanpour-Ezatti အမ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဟာ basolateral amygdala အတွက် cannabinoid အဲဒီ receptor agonist ၏ antinociceptive အကျိုးသက်ရောက်မှု attenuated ။ ဦးနှောက် Res ။ 2012; 1471: 23-32 ။ Doi: 10.1016 / j.brainres.2012.06.023 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ခန်းမ H ကို, Sallemark M က, Jerning အီး remoxipride ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ကြွက်ဦးနှောက် receptors အပေါ်အချို့သောဆက်စပ်သစ်ကိုအစားထိုး salicylamides ။ Acta Pharmacol Toxicol ။ 1986; 58: 61-70 ။ Doi: 10.1111 / j.1600-0773.1986.tb00071.x ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hiroi N ကို, အဖြူရောင်မိုင်။ dopamine အဲဒီ receptor Subtype နှစ်ယောက် dopaminergic terminal ကိုဒေသများ၏ differential ကိုပါဝင်ပတ်သက်မှု: အဆိုပါစိတ်ကြွဆေးရာအရပျ preference ကိုအေးစက်။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 552: 141-152 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (91) 90672-ငါ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hjelmstad GO ။ Dopamine နျူကလိယအချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သားလွှတ်ရာ differential ကိုမော်ဂျူမှတဆင့်အာရုံခံ accumbens excites ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 8621-8628 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3280-04.2004 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
dopamine D1 နှင့် D2 receptors ၏ Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Cascini MG, ဂေါ်ဒွန် AS, စိန်, ငါ Bonci အေသမဝါယမ activation နျူကလိယ၏ဆူးပစ်ခတ်ရန်, G-ပရိုတိန်း betagamma subunits မှတဆင့်အာရုံခံ accumbens တိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 5079-5087 ။ [PubMed]
Ishikawa တစ်ဦးက, Ambroggi က F, Nicola သည် SM, Fields HL ။ အမူအကျင့်များနှင့်နျူကလိယမှ Dorsomedial prefrontal cortex အလှူငွေမက်လုံးပေးတွေကိုမှအာရုံခံတုံ့ပြန်မှု accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 5088-5098 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.0253-08.2008 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koch က M, Schmid တစ်ဦးက, Schnitzler Hu ။ ကြွက်သားအခန်းက္ပ conditional ဆုလာဘ်၏ဆာနှင့် Pavlovian Paradigm အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors accumbens ။ Psychopharmacology ။ 2000; 152: 67-73 ။ Doi: 10.1007 / s002130000505 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
le Moines, C, အနျူကလိယ၏ peptidergic အာရုံခံအတွက် D3 dopamine အဲဒီ receptor ၏ Bloch ခဖော်ပြမှု accumbens: အ D1 နှင့် D2 dopamine receptors နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။ neuroscience ။ 1996; 73: 131-143 ။ Doi: 10.1016 / 0306-4522 (96) 00029-2 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lex တစ်ဦးသည်နျူကလိယအတွက် Hauber ဒဗလျူ Dopamine D1 နှင့် D2 receptors core နဲ့ shell ကို Pavlovian-ဆာလွှဲပြောင်းဖျန်ဖြေ accumbens ။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2008; 15: 483-491 ။ Doi: 10.1101 / lm.978708 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Liao RM ။ စိတ်ကြွဆေး၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ပြုတ်ရည်များကသွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို၏ဖွံ့ဖြိုးရေး dopamine D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor ရန်ပူးတွဲပြုတ်ရည်များက attenuated ဖြစ်ပါတယ်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2008; 89: 367-373 ။ Doi: 10.1016 / j.pbb.2008.01.009 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McGinty vB, Lardeux S က, Taha လုပ် SA ကင်မ် JJ, Nicola သည် SM ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Cue နှင့်နီးကပ် encoding ကအားဖြင့်ရှာကြံဆုလာဘ်၏ခှနျအား။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2013; 78: 910-922 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2013.04.010 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Morrison SE, Nicola သည် SM ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အာရုံခံနီးတ္ထုများအတွက်ရွေးချယ်ရေးဘက်လိုက်မှုမြှင့်တင်ရန်။ J ကို neuroscience ။ 2014; 34: 14147-14162 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.2197-14.2014 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mottola DM, Kilts JD, Lewis က MM, Connery HS, Walker က QD, ဂျုံးစ် SR, Booth RG, Hyslop DK, Piercey M က, Wightman RM, Lawler က CP, Nichols DE, စာပို့သမား RB ။ dopamine အဲဒီ receptor agonists ၏ functional ကိုရွေးချယ်ပါ။ adenylate cyclase ဆက်စပ် postsynaptic dopamine D2 receptors ၏ဗြဲရွေးချယ် activation ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2002; 301: 1166-1178 ။ Doi: 10.1124 / jpet.301.3.1166 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nicola သည် SM ။ အဆိုပါနျူကလိယတစ်ဦး Basal ganglia အရေးယူရွေးချယ်ရေးဆားကစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် accumbens ။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 521-550 ။ Doi: 10.1007 / s00213-006-0510-4 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nicola သည် SM ။ အဆိုပါပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်မှုယူဆချက်: နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့် cue-တုံ့ပြန်ယူဆချက်ပေါင်းစည်းရေးဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများ၏ activation အတွက် dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 16585-16600 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3958-10.2010 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nicola သည် SM, Malenka RC ။ Dopamine excitatory နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကွဲပြားယန္တရားများအားဖြင့် inhibitory Synaptic ဂီယာ depresses ။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 5697-5710 ။ [PubMed]
Nicola သည် SM, Yun IA, Wakabayashi KT, Fields HL ။ နျူကလိယ၏ Cue-evoked ပစ်ခတ်ရန်တစ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုတာဝန်စဉ်အတွင်းစိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှု encodes အာရုံခံ accumbens ။ J ကို Neurophysiol ။ 2004a; 91: 1840-1865 ။ Doi: 10.1152 / jn.00657.2003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nicola သည် SM, Yun IA, Wakabayashi KT, Fields HL ။ နျူကလိယ၏ပစ်ခတ်ရန်တစ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များ၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်စဉ်အတွင်းအာရုံခံ accumbens ယခင်ဆုလာဘ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ J ကို Neurophysiol ။ 2004b; 91: 1866-1882 ။ Doi: 10.1152 / jn.00658.2003 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nicola သည် SM, Taha လုပ် SA ကင်မ် SW, Fields HL ။ နျူကလိယ dopamine လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်သောနှင့်ဆုချ-ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မှတွေကိုပုအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်လုံလောက် accumbens ။ neuroscience ။ 2005; 135: 1025-1033 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroscience.2005.06.088 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ထို Y ကိုဒေါ် ND, ယောလ: D ဒါယန်း P. ဆေး dopamine: အခွင့်အလမ်းစရိတ်နှင့်တုန့်ပြန်သန်စွမ်း၏ထိန်းချုပ်မှု။ Psychopharmacology ။ 2007; 191: 507-520 ။ Doi: 10.1007 / s00213-006-0502-4 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ozer H ကို, Ekinci AC အ, Starr က MS ။ Dopamine D1- နှင့်ကြွက်များတွင် D2-မှီခို catalepsy reticulata ဆန်းစစ်မှုအတွက် Corpus striatum, နျူကလိယ accumbens နှင့် substantia nigra အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ NMDA receptors လိုအပ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ 1997; 777: 51-59 ။ Doi: 10.1016 / S0006-8993 (97) 00706-3 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ပါကင်ဂျာ Dalley JW, Cardinal RN, Bamford တစ်ဦးက, Fehnert B, Lachenal, G, Rudarakanchana N ကို, Halkerston KM, Robbins TW, Everitt BJ ။ နျူကလိယ dopamine လျော့ကျဝယ်ယူခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ် Pavlovian ချဉ်းကပ်အပြုအမူ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှစ်ဦးစလုံးချို့ယွင်း accumbens: mesoaccumbens dopamine function ကိုအဘို့အဂယက်ရိုက်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002; 137: 149-163 ။ Doi: 10.1016 / S0166-4328 (02) 00291-7 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pezze MA, Dalley JW, Robbins TW ။ ငါးရွေးချယ်မှုအမှတ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တာဝန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍ Differential ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 273-283 ။ Doi: 10.1038 / sj.npp.1301073 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Phillips က PE, Stuber GD, Heien ML, Wightman RM, Carelli RM ။ Subsecond dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုကင်းရှာအားပေးအားမြှောက်။ သဘာဝ။ 2003; 422: 614-618 ။ Doi: 10.1038 / nature01476 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Roitman MF, Stuber GD, Phillips က PE, Wightman RM, Carelli RM ။ Dopamine အစားအစာရှာတဲ့ subsecond modulator တွေကိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 1265-1271 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3823-03.2004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Roitman MF, ဝီ RA, Carelli RM ။ နျူကလိယတွင် neuron ပင်, ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိအရသာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ညှိသူတို့ရဲ့ခန့်မှန်းဝှက်နှင့်မော်တာ output ကိုချိတ်ဆက်နေကြပါတယ် accumbens ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005: 587-597 ။ [PubMed]
Salamone JD ကော်ရဲရားအမ် mesolimbic dopamine ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2012; 76: 470-485 ။ Doi: 10.1016 / j.neuron.2012.10.021 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Saunders BT, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ Pavlovian-အေးစက်တုံ့ပြန်မှု၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက် accumbens core ကိုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ EUR J ကို neuroscience ။ 2012; 36: 2521-2532 ။ Doi: 10.1111 / j.1460-9568.2012.08217.x ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schoenbaum, G, Chiba AA ကို, Gallagher အမ် Orbitofrontal cortex နဲ့ basolateral amygdala အန်ကုက်လုပ်ပါလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းရလဒ်များမျှော်မှန်းထားသည်။ နတ် neuroscience ။ 1998; 1: 155-159 ။ Doi: 10.1038 / 407 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schwartz JC, Diaz J ကို, Bordet R ကို, Griffon N ကို, Perachon S က, Pilon ကို C, Ridray S က, မျိုးစုံ dopamine အဲဒီ receptor Subtype ၏ Sokoloff P. Functional ဂယက်: အ D1 / D3 အဲဒီ receptor အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်။ ဦးနှောက် Res ဦးနှောက် Res ဗျာ 1998; 26: 236-242 ။ Doi: 10.1016 / S0165-0173 (97) 00046-5 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရှင် R ကို, Cao J ကို, ဝက်ဘ်သည် SM, Ikemoto အက်စ်ဖက်တမင်းဆေးပြားအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ventral striatum သို့ကြွက်များအတွက်ခြွင်းချက်မရှိအမြင်အာရုံအချက်ပြမှုများနှင့်အတူအမူအကျင့်အပြန်အလှန်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2010; 5: e8741 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0008741 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Steinberg EE, Boivin JR, Saunders BT, Witten ခလရ, Deisseroth K ကို Janak PH သည်။ midbrain dopamine အာရုံခံကကမကထပြုခဲ့အပြုသဘောအားကောင်းသည့်နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 နှင့် D2 အဲဒီ receptor activation လိုအပ်သည်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014; 9: e94771 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0094771 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Stuber GD, Hnasko TS, Britt JP, Edwards က RH အ, အနျူကလိယ accumbens အတွက် Bonci အေ Dopaminergic ဆိပ်ကမ်းပေမယ့်မ dorsal striatum အချိုမှု corelease ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 8229-8233 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.1754-10.2010 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Swanson LW ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ကပ်လျက်ဒေသစီမံကိန်း: တစ်ပေါင်းချောင်း retrograde tracer နှင့်ကြွက်များတွင်နဲ့ Immunofluorescence လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1982; 9: 321-353 ။ Doi: 10.1016 / 0361-9230 (82) 90145-9 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Taha လုပ် SA, Fields HL ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ကွဲပြားအာရုံခံလူဦးရေအားဖြင့်အာခေါင်နဲ့အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူများ encoding ။ J ကို neuroscience ။ 2005; 25: 1193-1202 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.3975-04.2005 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် Bockstaele EJ, Pickel VM က။ ကြွက်ဦးနှောက်အတွက်နျူကလိယ accumbens ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာစီမံကိန်းတွင်ဂါဘမြို့သားပါဝင်သောအာရုံခံ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 682: 215-221 ။ Doi: 10.1016 / 0006-8993 (95) 00334-M ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wyvell CL, Berridge KC ။ တိုးမြှင့် "ကဲ့သို့" သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲ "လို" ဆုလာဘ်များတိုးမြှင်: စိတ်ကြွဆေး sucrose ဆုလာဘ်၏အခြေအနေမက်လုံးပေး salience တိုးပွါးအချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 8122-8130 ။ [PubMed]
yun IA, Wakabayashi KT, Fields HL, Nicola သည် SM ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွက်အမူအကျင့်များနှင့်နျူကလိယမက်လုံးပေးတွေကိုမှအာရုံခံပစ်ခတ်ရန်တုံ့ပြန်မှု accumbens ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 2923-2933 ။ Doi: 10.1523 / JNEUROSCI.5282-03.2004 ။ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]